That's so good, right?: June 2011
အချိန်၊ နေရာဒေသ၊ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေက လူနှစ်ယောက်ရဲ့ကြားမှာ ဆက်ဆံရေးနှင့် အပြုအမူကို အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွား စေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်အစက သိပ်လက်မခံချင်ခဲ့ပါဘူး။
ထွန်းထွန်းနှင့် ကျွန်တော် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သိတာ ၆လလောက်ရှိပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရင်းနှီးနွေးထွေးတဲ့ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးက အမြန်ကြီးထွားလာပြီး အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအဖြစ် မကြာခင်မှာပဲဖြစ်သွားရပါတယ်။ ညပိုင်းအားလပ်ချိန်များ ဆို အပြင်ထွက်လည်း အတူတူ bar ဒါမှမဟုတ် club တွေသွားလည်းတတွဲတွဲပေါ့ နော်။ ညတွေအားလုံးလိုလို တသမတ်ထဲလိုလို အဆုံး သတ်သွား တာက ထွန်းထွန်းရဲ့ တိုက်ခန်းမှာ အချိန်ကုန်လွန်ပြီးနောက်မှာလေ။ မူမှန်အနေနဲ့တော့ လက်တစ်ဆုပ်စာ လူဦးရေပဲရှိကြတာ ထွန်းထွန်း ရဲ့ ဇနီးလောင်းအပါအ၀င်ပေါ့။ တစ်ညမှာတော့ ထွန်းထွန်းနဲ့ ကျွန်တော် နှစ်ယောက်တည်း သီးသန့်ဖြစ်ဖို့အချိန်တွေက ရောက်ရှိလာခဲ့ ပါတယ်။
ပထမတော့ အရာရာတိုင်းဟာ ကြည့်ရတာ သာမန်နှင့် အပြစ်ကင်းနေသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ TV ကြည့်ကြတယ်၊ ဘီယာနည်းနည်း သောက်ကြတယ်လေ။ ညနက်လာတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦး နည်းနည်းထွေစပြုလာတယ်။ အမျိုးသားအများစုလိုပါ သောက်သူတွေက မသောက်ခင်ထက်စာရင် လိင်ကိစ္စမှာ ပိုမိုထကြွလွယ်ကြတယ်ထင်တာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ စကားစမြည်တွေဟာ လိင်မှုကိစ္စ အကြောင်းအရာတွေဘက် ခပ်မြန်မြန်ပဲပြောင်းသွားတယ်။ သူနှင့်ကျွန်တော် အတိတ်ကလိင်မှုအတွေ့အကြုံတွေကို တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် လှည့်ပတ်ပြောကြတာ။ story တွေအားလုံးက ကျွန်တော့်စိတ်တွေကို ပိုမိုနိုးကြွစေသလို ထွန်းထွန်းကို အရမ်းလိုလား နေပြီဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိစေရပါတယ်။ထွန်းထွန်းက တက္ကသိုလ် ဘောလုံးလက်ရွေးစင် အားကစားသမားတစ်ယောက်၊ ကွေးကွေး ကောက်ကောက်နှင့် ဆံနွယ်တွေကရှုပ်ပွနေတတ်သလို မတ်တပ်ရပ်လိုက်တဲ့အခါ ၆ ပေ ၂လက်မလောက်ရှိပြီး ခန္ဓာကိုယ်က ကျစ်လစ် သန်မာတဲ့ ကြွက်သားဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုက ကျွန်တော်က bi ဆိုတာ ထွန်းထွန်းမသိဘူး၊ ပြီးတော့ သူ့မှာစေ့စပ်ထားတဲ့ ဇနီးလောင်းရှိနေခဲ့ပြီးပြီ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော့်စိတ်ခံစားချက်တွေ သိမ်းဆည်းထားခဲ့ခြင်း။
တစ်နာရီပြည့်လို့ နာရီဝက်ကြာသွားချိန်မှာ ထွန်းထွန်းက အရမ်းပင်ပန်းလာသလိုပဲတဲ့ပြောပါရဲ့။ ကျွန်တော်လည်း အိမ်ကိုကားမောင်းပြန် ဖို့အဆင်မပြေတာကြောင့် ဧည့်ခန်းက ဆိုဖာမှာပဲ ဒီညကို အချိန်ဖြုန်းလိုက်တော့မယ်လို့ သူ့ကိုပြောပြလိုက်တယ်။ 'ကောင်းတာပေါ့....ငါ တော့ ဒီဂျင်းဘောင်းဘီကို တခြားဘောင်းဘီနှင့်သွားလဲလိုက်ဦးမယ် နေရတာ သက်သောင့်သက်သာမရှိဘူး' တဲ့ သူကကြေငြာတယ်။
ကျွန်တော် သူ့ကိုစကားမပြန်တော့ပါဘူး ဆိုဖာပေါ်အသာလှဲလိုက်ပြီး ထွန်းထွန်းဘယ်လို အတွင်းခံမျိုးဝတ်ထားလဲရယ်၊ ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်ရင် သူ့ပစ္စည်း ဘယ်လောက်ကြီးမလဲသာ စိတ်ကူးနေလိုက်မိပါတယ်။ ထွန်းထွန်းမကြာခင် အခန်းထဲပြန်ဝင်လာပြီး ကျွန်တော့်ကို အံ့အားသင့်အောင်ပြုတာဗျ။ ကျွန်တော့်စိတ်အကြံကို ဖတ်မိသွားသလားမသိနော်။ သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဘောင်းဘီ တစ်ခုခုနဲ့သွားလဲမယ်လို့ဆိုတာက ဂျင်းဘောင်းဘီကို သွားချွတ်ရုံသက်သက်ပဲ။ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာရပ်နေတဲ့ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ တီရှပ်ရယ် အနက်ရောင်ဖဲသား boxer ဘောင်းဘီတိုရယ်သာရှိတယ်။ အဲဒီ boxer ဘောင်းဘီလေးနှင့်မြင်ရတာ ကျွန်တော့စိတ်ကို နှိုးဆွနေသလို ပေါ့။ ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ကုန်းထနေတဲ့ငပဲကောက်ကြောင်းကို မြင်ရသား။ ခပ်ပါးပါးဖဲသားစနောက်မှာ လှပစွာဖုံးကွယ်နေသော အရာ လေ။ သူက ကျွန်တော့်နံဘေးမှာဝင်ထိုင်ရင်း 'ငါတို့ ဟိုကားတစ်ကားလောက်ကြည့်ရအောင်' တဲ့ပြောတယ်။ ဒီတော့လည်း ကျွန်တော်က 'သေချာတာပေါ့ ကြားရတာနဲ့တင်ရင်ခုန်တယ်' လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပေါ့။
အပြာကားပြတာ သိပ်မကြာသေးခင်မှာပဲ ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် စတော့တာပဲ။ သူ့လက်တစ်ဖက်က ဘောင်းဘီထဲရောက်သွားကာ ကစားနေလိုက်တာ သူ့ငပဲကြီး ထွားကျိုင်းလာတာကို ကျွန်တော် သတိမပြုဘဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ သူ့ဟာကို ကျွန်တော် အာရုံစိုက်ကြည့် နေတာကို မိသွားတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ကို ရယ်ချင်သလိုအပြုံးမျိုးပေးပြီး ကျွန်တော့်ကို သက်သောင့်သက်သာဖြစ်သလိုနေတဲ့ပြော တယ်။ 'မင်းဘောင်းဘီကိုချွတ်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ပျော်သလိုနေစမ်းပါကွာ' တဲ့ရယ်ကျဲကျဲနှင့် ကျွန်တော့်ကိုဆိုလေခြင်း။ ထွန်းထွန်း က straight ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူ့အပြုအမူတွေက သူ့ငပဲကို ကျွန်တော်ကိုင်ပြီး ကစားလည်းအိုကေတယ်ဆိုတဲ့ ဟန် အမူအရာမျိုးပြပါတယ်။
အချိန်ဖြုန်းမနေတော့ဘဲ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်တယ်။ ထွန်းထွန်းရှေ့မှာ ဘောင်းဘီမပါဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်စတင်တွေ့မိစဉ်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားခံရသော သူ့ကို ၆လက်မကျော်ရှည်ပြီး မာတောင့်နေတဲ့ အမြှောက်တံကြီးဖြင့် ချိန် ရွယ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော် ထွန်းထွန်းရဲ့ မျက်ဝန်းတွေို့ ကြည့်လိုက်တော့ သူ့မျက်လုံးအကြည့်တွေဟာ ကျွန်တော့်ငပဲဆီကို စူးစူးစိုက် စိုက်ကြည့်နေရော။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ငပဲကိုကိုယ်လက်ငါးချောင်းဖြင့် အားရပါးရဆုပ်ကိုင်ကာ နည်းနည်းလောက်ကစားပြီးနောက် လုံးဝန်း ကြီးမားသော ရွှေဥတွေကို ပွတ်သပ်ကစားမိပါတယ်။ ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် ချီတုံချတုံမဖြစ်ဘဲ ကျွန်တော့်ဆီတိုးကပ်လာပါ၏။ သူ ကျွန်တော့်ငပဲကို ဆွဲကိုင်ကာ စတင်လှုပ်ရှားကစားတော့တယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်မှာ အတော်ဖိန်းတိန်းရှိန်းတိန်းဖြစ်စေပြီး အရမ်း turn-on ဖြစ်စေတာပဲဗျ။
ထွန်းထွန်းနဲ့ ကျွန်တော် မျက်ဝန်းခြင်းဆုံမိတော့ သူက 'ငါ....ဒီလိုလုပ်ချင်နေတာ ကြာလှပြီ'တဲ့။ ပြီးတော့ သူ ဆိုဖာဘေးကို ဒူးထောက် ထိုင်ချလိုက်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲရဲ့ အောက်ခြေကနေ ထိပ်ပိုင်းအထိ အားရပါးရအပြန်အလှန် လျက်ပြုပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲထိပ် ကွမ်းသီးခေါင်း အပေါက်ဝကို လျာဖြင့် တို့တို့ကစားသလို အရေပြားကြားကို သူ့လျှာဖျားနှင့်မွှေသေးတာ။ အရည်ကြည်တွေကို အရသာ ခံသလားမသိ။
ထွန်းထွန်း ကျွန်တော့်ငပဲကို အဆုံးထိတစ်ချက်ငုံကာ ပြန်ထုတ်လိုက်ရင်း ရွှေဥတွေကို လျက်ပါတယ်။ 'နှစ်ဥလုံးကိုပါးစပ်ထဲ အားလုံးငုံ ကြည့်စမ်းပါဗျာ' လို့ ကျွန်တော်တောင်းဆိုကြည့်လိုက်တော့ 'Yeah, မင်းအဲလို လုပ်စေချင်လား' ဆိုပဲ။
ထွန်းထွန်းတော်တော်ကို တက်မက်ဟန်ဖြင့် ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေဖြင့်ပွတ်သပ်နေသေးတာ။ God! ကျွန်တော့်ကို ကလိထိုးနေသလို ယားကျိကျိဖြင့် စိတ်ထဲ ခံစားရကာ ရွှေဥတွေကိုငုံစုပ်ဖို့ တောင်းပန်ရစေပါရဲ့။ 'ဟုတ်တယ်, အဲဒါတွေကို စုပ်ပေးပါ' ကျွန်တော်အော်ဟစ်တောင်းဆိုမိပါတယ်။
ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် ကျွန်တော့်တောင်းဆိုမှုရဲ့ နောက်မှာတော့ သူ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို ပူနွေးနေတဲ့ သူ့အာခံတွင်းထဲကို ငုံစုပ်ပါ ရော။သူဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုရင် ရွှေဥတွေကို ငုံထားရင်းက လျှာဖြင့်မွှေနေတာလေ။ အဲဒီလိုလုပ်နေတာ အတော်ကြာတာ။ ကျွန်တော်သူ ဒူးထောက်နေတာကို ဆွဲထူ မတ်တပ်ရပ်စေရင်း ကျွန်တော် သူ့ ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ်။ ငပဲက ဘောင်းဘီ မျှော့ကြိုးကနေ ငေါက်ကနဲပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ရှည်လျားပြီး လုံးဝန်းနေတာ လှပတဲ့ dildo အတုတစ်ခုနှင့် ဆင်တူသလိုထင်ရပါ့။ လက်နှင့်အသာကိုင် ပြီးနောက် ထိပ်ပိုင်းကို ငုံကြည့်ရင်း လည်မျိုထဲရောက်နိုင်သမျှရောက်အောင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ထွန်းထွန်းနှုတ်ခမ်းမှ ညည်းညူမိန့်မူးသံ ကျယ်လောင်စွာထွက်လာသလို ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို ဆွဲကိုင်ပြီး ငပဲကိုပြန်နှုတ်ရော။ ပြီးတော့ လည်မျိုထဲကို အဆုံးထိဖိဖိသွင်းတာ အသက်ရှူမ၀သလိုတောင် ဖြစ်မိပါတယ်။ သူ့ငပဲကို ပြန်ပြီးဆွဲထုတ်ချိန်မှ ကျွန်တော် အသက်ကိုရှူရှိုက်ရသလို ပြန်လည်ဖိသွင်းတော့ လည်း အဆင်ပြေအောင်နေပေးမိပါ၏။ သူ အဲဒီလိုလုပ်နေတာ မိနစ်အတော်ကြာတယ်။ ကျွန်တော်သူ့ရွှေဥတွေကို လက်နဲ့အသာပွတ် သပ်ပေးတော့ သူ့ငပဲက မတ်ကနဲ မတ်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ သိပ်မကြာပါဘူး ထွန်းထွန်း ပျစ်ချွဲချွဲ သူ့သုတ်ရည်တွေကို ကျွန်တော့် လည်မျိုထဲ တော်တော်များအောင် ပစ်ထည့်တော့တယ်။ ကျွန်တော်မျိုချမိနိုင်သလောက် မျိုချမိရင်း ချောင်းမဆိုးမိအောင် ကြိုးစားရတာ ပေါ့နော်။
'အတော် အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်' ထွန်းထွန်း အဲဒီစကားလုံးကိုလေးလေးပင်ပင်ဆိုရင်း ဆိုဖာပေါ် ပစ်လှဲလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးသားဆိုဖာပေါ်အတူ လှဲလျောင်းရင်း တစ်ယောက်ခန္ဓာကိုယ်ကို တစ်ယောက် လက်နှင့် ပွတ်သပ်နေမိကြပါတယ်။ တစ်ကြိမ်တော့ ထွန်းထွန်း အသက်တစ်ချက်ရှိုက်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ငန်ကျိကျိ သုတ်ရည်အရသာကို သူခံစားချင်ခဲ့တယ်လို့ပြော တာဗျ။ ကျွန်တော့် လည်တိုင်တလျောက်ကို အနမ်းဖွဖွသူ စတင်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ နို့သီးခေါင်းတွေဆီ လျောချရင်း တစ်ခုခြင်းစီကို ငုံစုပ်ပါ၏။ တကယ့်ကို နုနုညံ့ညံ့ငြင်သာစွာပေါ့။ ဗိုက်သားပြင်ပေါ်က ကြွက်သားအဖုဖုတွေကို နှုတ်ခမ်းများဖြင့် ပွတ်သပ်ပြီးနောက် ချက်မှ ဆီးစပ်ထိအမျှင်တန်းနေတဲ့ အမွှေးနုလေးတွေက တစ်ဆင့် မာတောင်နေဆဲ ကျွန်တော့်ငပဲဆီ။ နုညံ့တဲ့ သူ့လက်တွေဖြင့် ကျွန်တော့်ရွှေဥ တွေကို ပွတ်သပ်ပြီးနောက် ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ပါးစပ်ထဲ ခပ်ဖြေးဖြေးစသွင်းပါတယ်။ ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့ ခံစားမှုဟာ အတော် good တာပါပဲ။ ထွန်းထွန်း ခပ်နှေးနှေး ကျွန်တော့်ငပဲကို စုပ်ပြုနေပြီးမှ သူ့လည်မျိုထဲအလွယ်တကူမျိုချလိုက်ပါတယ်။ သူ့ဦးခေါင်းကို လှုပ်ရှားလိုက်ကာ အထက်အောက်ပြုမှုက တစ်ကြိမ်ထက်တစ်ကြိမ် သူ့လည်မျိုထဲရောက်အောင်လုပ်တာ။
သိပ်တော့မကြာပါဘူး ထွန်းထွန်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ၆လက်မကျော်ငပဲတစ်ခုလုံးကို သူ့ပါးစပ်ထဲသွင်းတာ နှာခေါင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီးစပ်က ခြုံ ပုတ်ငယ်ထိတွေ့တဲ့အထိပါပဲ။ ကျွန်တော့် ချစ်သူငယ်ချင်းရဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို ပြုစုနေတာ အံသြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပါပဲ ကောင်း တာ။ သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကို ကြည့်ရတာ ပထမဆုံးအကြိမ် -ီးစုပ်တာမှဟုတ်ရဲ့လားသိချင်စိတ်ကို နှိုးထစေပါတယ်။ တစ်ချိန်လုံးလိုလို ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကိုလည်း သာသာယာယာ ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်သေးတာ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေရဲ့နောက် ကျွန်တော့်ခရေ၀ဆီ လက်ချောင်း တစ်ချောင်းက ရောက်ရောက်လာတယ်။
အထိအတွေ့အာရုံနှိုးဆွမှုအလုံးစုံဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ခံစားမှုအမြင့်ဆုံးကိုပေးတာပေါ့။ ကျွန်တော့်မှာ အလန့်တကြားလိုလို အော်ပြီး သတိပေးရတာပေါ့ အထွဋ်အထိပ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာ။ ထွန်းထွန်း ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံစီ မျက်နှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်မူလိုက်ကာ သူ နိုင်သမျှအားလုံး ငုံစုပ်ပါတယ်။ သူ့ပါးစပ်ထဲကို တစ်လျော့ပြီး တစ်လျော့ ကျွန်တော်သုတ်ရည်တွေို့ ပန်းထည့်လိုက်ပါရဲ့။ ကျွန်တော့်ငပဲ ပျော့ပျောင်းလာတဲ့အထိ သူ့ရဲ့စုပ်ပြုမှုကို မရပ်ဆိုင်းပါဘူး အရာအားလုံးပြီးတော့ ကျွန်တော့်မျက်နှာနှင့် သူ့မျက်နှာမူလိုက်ကာ နမ်းပါ တော့တယ်။
ကျွန်တော် ကိုယ့်သုတ်ရည်ရဲ့အရသာကို ပြန်ပြီးခံစားရတာက သူ့နှုတ်ခမ်းများဆီမှလေ။ နောက်တော့ ထွန်းထွန်းက မတ်တပ်ရပ်လိုက် ကာ သူနှင့်အတူ အိပ်စက်ချင်ရင် လိုက်ခဲ့ဖို့ ကျွန်တော့်ကို ခေါ်တာကြောင့် လိုက်သားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဖက်လှဲတကင်းနှင့် အိပ်စက်နိုင်တာပေါ့နော်။ ငြင်းဆန်ဖို့ ကျွန်တော့်မှာ အကြောင်းပြချက်မရှိတာကြောင့်လေ။
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်မှာတော့ ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့တွေပဲ သီးသန့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာနဲ့ အချိန်ကို အဆုံးရှုံးမခံ အ၀တ်တွေအားလုံး ချွတ် အတူတကွ ပျော်ရွှင်မှုဆီကိုပေါ့။ ဒါတွေဟာ အချိန်တွေကုန်လွန်ပြီးနောက် လက်ခံခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေပါပဲ
Alex Aung (29-6-2011)
Posted by Alex Aung at 5:08 PM No comments:
Q 1: ကျားအင်္ဂါ စိုစွတ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရပါသလဲ။
Q 2: ဘယ်ဟာ ပ်ိတ်တာလဲတော့ မသိဘူး။
Q 3: တကယ်လို့ မွေးလမ်းကြောင်း ပိတ်တယ်ဆို ကလေးမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့။
Q 4: Vigrxplus ဆိုတဲ့ ကြီးထွား သန်မာဆေးကို သုံးကြည့်ချင်လို့
Q 5: ကျား+ကျားချင်း လိင်တူ တစ်ယောက်ထဲကိုပဲ ဆက်ဆံတာပဲဖြစ်ဖြစ်
Q 6: လိင်ဆက်ဆံရင် ခဏလေးဘဲ ၂ မိနစ်လောက်ဘဲ မကြာဘူး။
Q 7: Prexil, VigRX Plus, PreJac, Priligy ဆေးတွေက ဘယ်လိုသောက်ရမှာလဲ။
Q 8: KY ဂျယ်လီ ကို စမ်းသပ်သုံးကြည့်ချင်ပါတယ်။
Q 9: တကိုယ်ရေ အာသာဖြေခြင်းနဲ့ ဝခြင်း ပိန်ခြင်းဟာ သက်ဆိုင်ပါသလား။
Q 1: ကျားအင်္ဂါ စိုစွတ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရပါသလဲ။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ ပါးစပ်သုံးတာ မြင်ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ပါးစပ် မသုံးချင်ဘူးတဲ့။ တခြားနည်းလမ်းရှိလား။ ပြီးတော့ သူပစ္စည်းက ပိတ်နေပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လုပ်ရပါသလဲ။ ဆေးစားလို့ ရသလား၊ ဘာဆေးလဲ။ မဆက်ဆံဘဲနဲ့ ကလေးရနိုင်သလား။ တကယ်လို့ သူအပေါက်ပိတ်နေရင် ကလေးရနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းသလား။ ကလေးရဖို့က လိင်ဆက်ဆံတာနဲ့ ဆိုင်ပါသလား။
• မရှင်းတာလေး ပြောပါအုံး။ မေးတဲ့သူက နာမည်အရ ယောက်ျားဖြစ်မှာဆိုတော့ သူကဆိုတာ မိန်းကလေးပေါ့။
• ဒါပေမဲ့ သူ့ပစ္စည်းက ပိတ်နေတယ် ဆိုတာ ဘာလဲ။
• မဆက်ဆံဘဲ ကလေးမရပါ။ တခုတော့ရှိတယ်။ ကလေးမရတာကို ရအောင် ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ ပေါင်းစပ်ပြီး သားအိမ်ထဲ ပြန်ထည့်နည်းလုပ်ရင် ဆက်တံတာမပါဘဲ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်။
• မိန်းကလေး အပေါက်ပိတ်တယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာလဲ၊ သားအိမ်အဝလား၊ သားအိမ်ပြွန်လား။
• မွေးလမ်းကြောင်း ပိတ်တာဆိုရင် လိင်အင်္ဂါထိုးသွင်းလို့ကို မရနိုင်ပါ။
• ယောက်ျားလေး ပိတ်တယ်ဆိုရင် ပန်းငုံတာလား။
• ယောက်ျားအင်္ဂါ စိုစွပ်မှုဆိုတာ ထူးလုပ်ဘို့ မလိုပါ။ အသက်သိပ်မကြီးသေးသူမှန်သမျှ မလိုပါ။ အမျိုးသမီးကြီးများမှာသာ သွေးဆုံးချိန်ရောက်မှ၊ ဟော်မုန်းနည်းတာ ဖြစ်မှသာ မ-အင်္ဂါစိုစွပ်မှု နည်းတတ်၊ နှေးတတ်တယ်။
• ဘယ်အရွယ်မှာမဆို Foreplay ဆက်ဆံမှုအဆင့် (၁) ကို အချိန်ပေးရင် ဆေးသုံးစရာ မလိုပါ။
• Oral နည်းသုံးရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေတယ်။
• လိုအပ်သူတွေသာ KY jelly သုံးဘို့ လိုပါတယ်။
Q 2: ဘယ်ဟာ ပ်ိတ်တာလဲတော့ မသိဘူး။ အဂါင်္တော့ထိုးလို့ မရဘူး။ သားအိမ်ပြွန်ပိတ်တယ်ဆို ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ။
• သားအိမ်ပြွန်အထိတော့ မဟုတ်သေးပါ။ အင်္ဂါပိတ်တယ်ဆိုတာ သားအိမ်ပြွန်ပိတ်တာကိုမှ ပိတ်တယ် ခေါ်လို့သာ ထည့်ရေးလိုက်တာ ဖြစ်တယ်။
• လိင်အင်္ဂါထိုးသွင်းလို့ မရဘူးဆိုတာ တကယ် မွေးရာပါ ပိတ်နေတာလဲ ရှားရှားပါးပါး ရှိသေးတယ်။
• အပျိုစစ်စစ်ကို ဆက်ဆံရင် နာကျင်မှု၊ စိုးရိမ်မှုကြောင့်လဲ ထိုးသွင်းမရ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• လက်ညှိုးကို ရေဆေးပြီး တချောင်းထဲ အသာအယာ ထိုးသွင်းကြည့်ပါ။ သူကိုယ်တိုင်လဲ လုပ်နိုင်တယ်။ လက်ဆစ် ဘယ်လောက်အထိ ဝင်နိုင်သလဲ။ တခါသုံး-လက်အိပ်သုံးတာ အကောင်းဆုံးပါ။
• သားအိမ်ပြွန်အထိတော့ မဟုတ်လောက်ပါ။ သားအိမ်ပြွန်ပိတ်တာကိုမှ ပိတ်တယ် ခေါ်လို့သာ ထည့်ရေးလိုက်တာ ဖြစ်တယ်။
• လက်ညှိုးကို ရေဆေးပြီး တချောင်းထဲ အသာအယာ ထိုးသွင်းကြည့်ပါ။ သူကိုယ်တိုင်လဲ လုပ်နိုင်တယ်။ တခါသုံး လက်အိတ် သုံးနိုင်ရင် ကောင်းတယ်။ လက်ဆစ် ဘယ်လောက်အထိ ဝင်နိုင်သလဲ။
Q 3: တကယ်လို့ မွေးလမ်းကြောင်း ပိတ်တယ်ဆို ကလေးမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ ပြီတော့ သူမက အဖြူဆင်းတာများတယ်။ ရာသီလာရင်လဲ7ရက်လောက်ကြာတယ်။
• မွေးလမ်းကြောင်းပိတ်တယ်လို့ ခပ်လွယ်လွယ်ပြောတာက မတိကျသေးပါ။
• Imperforate hymen အပျိုမြှေးပိတ်တာ၊ အပေါက်သိပ်ကျဉ်းတာကို ပြောတာ။
• ရာသီလာနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးမှာ အဲဒါမဟုတ်နိုင်ဘူး။
• ကလေးမရနိုင်သူ၊ ရဘို့ခက်သူဆိုတာ သားအိမ်ပြွန် ကျဉ်း-ပိတ် သူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
Q 4: ကျွန်တော့် အသက်က ၂၈ နှစ်ပါ။ ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ Male ပါ။ Vigrxplus ဆိုတဲ့ ကြီးထွား သန်မာဆေးကို သုံးကြည့်ချင်လို့ ဆေးရဲ့ ကောင်းကျိုး-ဆိုးကျိူးလေးတွေ ပြောပြပေးပါးအုံး။ ဆေးက Canada ကလာပြီး ၃ လလောက် သောက်ပြီးယင် နဂိုထက် ပိုကြီး၊ ပိုသန်၊ ပိုကြာလာစေတယ်လို့ ဆိုတယ်။
VigRX Plus ဆိုတဲ့ ယောက်ျား-လိင်အဂ်ါ တိုးတက်-သန်မာစေတဲ့ဆေးဟာ ဆေးကြော်ညာအဆိုအရ သဘာဝ ဒါမှမဟုတ် ဆေးဘက်ဝင် ပစ္စည်းတွေကနေ ဖေါ်စပ်ထားတယ်။ ဒီလိုဆေးမျိုးတွေမှာ ယေဘုယျ ပြောရရင် ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး နည်းလှတယ်။ ဒီဆေးမှာ ရှိနိုင်တာတွေက ခေါင်းကိုက်တာ၊ ဝမ်းချုပိ-ဝမ်းလျှောတာ၊ ပျို့-အန်ချင်တာ၊ အားယုတ်တာ၊ အိပ်မပျော်တာ၊ ကိုယ်မွှေးများတာ၊ အာခေါင်ခြောက်တာ၊ နှာခေါင်းသွေးယိုတာ၊ ရင်သားနာတာ၊ အစားပျက်တာ၊ အစာမကျေတာ၊ လိင်စိတ်နည်းတာ၊ ချွေးထွက်တာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဆိုးဝါးတာ မပါဘူး။ ဆေးကြော်ညာမှာဘဲ ကောင်းတယ် ဆိုတာတွေ ပါတယ်။ ဒီဆေး ကောင်းပါတယ်လို့ ထောက်ခံသူတွေထဲမှာ ဆရာဝန်တွေလဲ ပါနေတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့တော့ ဒိထက် ပိုမပြောနိုင်ပါ။
Q 5: (၁) ကျား+ကျားချင်း လိင်တူ တစ်ယောက်ထဲကိုပဲ ဆက်ဆံတာပဲဖြစ်ဖြစ် မ+မချင်း လိင်တူ တယောက်ထဲကိုပဲ ဆက်ဆံတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရိုးမြေကြ နေထိုင်သွားရင် ဘာဖြစ်နိုင်ပါလဲ။
(၂) ကျားနဲ့ မနဲ့ လက်မထက်ခင် လိင်ဆက်ဆံမယ် ဆက်ဆံတိုင်း ကိုယ်ဝန်မရတဲ့ ဆေးတွေ သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေက ဘာလောက်တောင်များသလဲ။ နောင်တချိန် ကလေးမရနိုင်တော့တဲ့အထိ ဖြစ်လာနိုင်လား။
(၃) (Kamagra, Tadalis, Viagra) ပုံက ဆေးများသည် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်တဲ့ ဆေးများဆိုတာ ဟုတ်ပါရဲ့ လား။
၁။ လိင်တူဆက်ဆံတာကို လူမှုရေးဒေါင့်ကို မရေးလိုပါ။ ကျန်းမာရေးက ကြည့်ရင် ဘယ်သူ့မှာမှ ကူးစရာရောဂါ မရှိရင်တော့ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ ရစရာမရှိပါ။
၂။ ကိုယ်ဝန်တားနည်းတွေအကြောင်း၊ အဆိုး-အကောင်းတွေအကြောင်း ရေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နည်း မတူရင် အကျိုးလဲ မတူပါ။ ကလေးမရ-ရ အကြောင်းမှာ တားဆေးအပြင် တခြား စဉ်းစားစရာတွေလဲ ရှိပါသေးတယ်။ ရေးထားပြီးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖတ်ပါ။ ရှာမတွေ့ရင် သိချင်တဲ့ အကြောင်း တခုချင်း မေးနိုင်ပါတယ်။ ပို့ပေးပါမယ်။
၃။ ပုံထဲကဆေးတွေဟာ ပန်းသေ-ပန်းညှိုးအတွက်ဆေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ့ ဆိုဒ်ထဲမှာ ရေးထားပြီး ရှိနေပါတယ်။ တားဆေးတွေ မဟုတ်ကြပါ။
Q 6: ကျွန်တော်က ပိန်တယ် ဝလည်းဝချင်တယ်။ ပြီးတော့ လိင်ဆက်ဆံရင် ခဏလေးဘဲ ၂ မိနစ်လောက်ဘဲ မကြာဘူး။ ဆက်ဆံတိုင်း ဆေးအမြဲသောက်ရတယ်။ ဆေးသောက်ပြီးရင် အမြဲတန်း အန်တယ် ခေါင်းမူးတယ် နေလို့ ထိုင်လို့ မကောင်းဘူး။ ထမင်းလည်း စားလို့ မရဘူး၊ အန်ချင်သလို ဖြစ်နေတယ်။ လေတတ်မှ အဆင်ပြေတယ်။ ကျွန်တော့် အသက်က ၂၅ ရှိပြီ။ ဆေးကတော့ ဆိုင်က ဝယ်သောက်တာ။ သေချာတော့မသိဘူးဗျ။ အိမ်ထောင်သက်က ၄ နစ်ရှိပြီး၊ ကလေးတော့ မယူဖြစ်သေဘူး။ အလုပ်တွေ လုပ်နေရလို့ ဓါတ်မှန်တို့ ဘာတို့တော့ မရိုက်ဘူး။ သွေးတိုးတော့ ရှိတယ်။ သောက်ဆေး ဖြစ်ဖြစ် ဘာလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရမလဲတော့မသိဘူး။ လေကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့တော့ အချိန် သိပ်မပေးနိင်ဘူး။
၁။ Weight gain လှယုံမက ဝချင်သေးရင် ကို ဖတ်ပါ။ လိုက်နာပါ။
၂။ Viagra သန်မာစေတဲ့ဆေး ကို ဖတ်ပါ။ လိုက်နာပါ။
၃။ Aphrodisiac လိင်စိတ်အားပေး အစာနဲ့ ဆေးများ ကို ဖတ်ပါ။ လိုက်နာပါ။
၄။ Kegel exercises for Men ယောက်ျားများ စိတ်ဝင်စားကြသည် ကို ဖတ်ပါ။ လိုက်နာပါ။
Q 7: ဆရာ ဆိုက်ထဲမှာ ပြောထားတဲ့ Prexil, VigRX Plus, PreJac, Priligy ဆေးတွေက ဘယ်လိုသောက်ရမှာလဲ။ တရက် တလုံးလား၊ ဆက်ဆံခါနီးလား။ ဆေးတွေကို တမျိုးကိုပဲ သောက်ရမှာလား၊ အကုန် သောက်ရမှာလား။ ဆေးတွေက ကျားအင်္ဂါ တောင့်တင်းတဲ့ ဆေးတွေနဲ့ကော ရောသောက်လို့ရလား။
• Prexil capsule ဆေးကို တနေ့ ၁ လုံး၊ အစာစားပြီး သောက်ပါ။ ၄-၆ လ ကြာရင် အကောင်းဆုံး အခြေအနေကို ရောက်လာမယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ၂ ရက် ၁ လုံး၊ နောက် ၃ ရက် ၁ လုံးသာ သောက်ပါ။ တရက် ၁ လုံး ဆက်သောက်လဲ ရတယ်။
• VigRX Plus ဆေးကို တနေ့ ၁ လုံးသောက်ပါ။ တချို့ကလဲ တနေ့ ၂ ကြိမ် သောက်တယ်။
• Prejac တနေ့ ကို မနက်ထမင်းစားပြီး ၁ လုံး၊ ညနေထမင်းစားပြီး ၁ လုံးသောက်ပါ။
• Priligy tablet ဆေးကို လိင်မဆက်ဆံမီ ၁-၃ နာရီအလိုမှာ ၁ လုံး သောက်ပါ။ အစာနဲ့ နီးနီး-ဝေးဝေး ရတယ်။
ဆေး အမျိုးအစားတူတာထဲက ၁ မျိုးသာ လိုပါမယ်။ ဆေးအစွမ်းတွေ မတူကြပါ။ ကိုယ်ကဘာအတွက် ရချင်သလဲ အပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးရွေးပါလေ။
• ဆေးအပြင် စိတ်အားတိုးတက်-ကောင်းမွန်တာလဲ အလွန်အရေးပါတယ်။ ငါ စွမ်းဆောင်နိုင်တော့မယ်။ တိုးတက်လာပြီ၊ ငါစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ ယောက်ျားဖြစ်လာ-ဖြစ်နေပြီ။
Q 8: KY ဂျယ်လီ ကို စမ်းသပ်သုံးကြည့်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ၂ ယောက်က ခု (့) မြို့မှာပါ။ (့) မှ ဆေးဆိုင်တွင် သွားဝယ်ကြည့် သော်လည်း မရှိပါ။ မကြာခင် Mandalay ဆင်းဖြစ်မှပဲ ရှာဝယ်လိုက်ပါမယ်။ ဆေးဆိုင်တွင် KY ဂျယ်လီ ဟုဆိုရုံဖြင့် ဝယ်လိုရနိုင်ပါလား။ KY ဂျယ်လီ သည် သုံးလျှင် စိုးရိမ်စရာများရှိပါသလား။ မည်ကဲ့သို့ သုံးစွဲရမည်ကို ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်။ ကျွန်တော် ပန်းသေးပန်းညိုး ရောဂါ ခံစားနေရသည်ဟု ထင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် Viagra ဆေးအစစ် ဝယ်လိုပါတယ်။ မည့်သည့် Brand သို့မဟုတ် မည်ကဲ့သို့သော Viagra ဆေးမျိုးကို ဝယ်ယူသင့်ပါလဲ။ တရုတ် ထုတ်ဆေးမျိုး ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါခင်ဗျာ။ ဆရာ့ Website ကို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလို့မလွယ်ကူ လို့ပါ။ blogspot.com မှန်သမျှကို banned ထားလို့ပါ။
၁။ KY Jelly က အများဆုံးသုံး နာမည် ဖြစ်တယ်။ အဲဒီဘက်မှာ တခြားနာမည် ဖြစ်မလားဘဲ။ ဖြစ်နိုင်တာတွေ ရှာပြီး ပို့လိုက်ပါတယ်။ KY Jelly ကို ချောဆီသဘော သုံးရတာဖြစ်လို့ လိုတဲ့အချိန်မှာ မ အင်္ဂါမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကျားအင်္ဂါဖြစ်ဖြစ် သုတ်လိမ်းပါ။ စောင့်နေစရာမလိုပါ။ ရေကနေဖေါ်စပ်တာဖြစ်လို့ သန့်ရှင်းဘို့လွယ်တယ်။ မသန့်သေးလဲ နေလို့ရတယ်။ မတည့်တဲ့သူ မကြားဘူးသေးပါ။
၂။ Viagra သုံးဘို့ မလိုလောက်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မှာပါ။ တကယ်စမ်းချင်ရင် ရေးထားတဲ့စာကို တွဲပို့လိုက်ပါတယ်။
၃။ Viagra သန်မာစေတဲ့ဆေး အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၅၇)
၄။ Blogspot ကနေ အထဲက ဖတ်နိုင်အောင် ပြောင်းဘို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
Q 9: ကျွန်တော်က အသက် 24 ရှိပါပြီ။ တကိုယ်ရေ အာသာဖြေခြင်းနဲ့ ဝခြင်း ပိန်ခြင်းဟာ သက်ဆိုင်ပါသလား။ ကျွန်တော်က နဲနဲပိန်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေခြင်းကိုလည်း တစ်ပတ်လျှင် ၃ ကြိမ်မျှ ပြူလုပ်ပါသည်။ ပုံမှန်ထက် အာသာဖြေခြင်းကို ပြူလုပ်ပါက တခြားဆိုးကျိူးများကိုလဲ ရှင်းပြပေးစေလိုပါသည်။
Masturbation (မာစတာဘေးရှင်း) အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၂၅) ကို ဖတ်ပါ။
Posted by Alex Aung at 1:58 PM No comments:
Q 1: အတူတူနေရင် ဆီးစပ်က ကိုက်ကိုက် လာတတ်ပါတယ်။
Q 2: ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ ပါးစပ်သုံးတာ မြင်ဖူးတယ်။
Q 3: ညားခါစ အိမ်ထောင်သည် တယောက်ပါ။
Q 4: အဖော် တစ်ယောက်နဲ့ အကာအကွယ်မဲ့ ဆက်ဆံခဲ့မိတယ်။
Q 5: ဆရာရှင့် အရေးပေါ်တားဆေးက ပထမအလုံးက ဘယ်အချိန်မှာ သောက်ရမှာပါလဲရှင့်။
Q 1: သားအိမ်ပြင်ပမှာ သန္ဓေတည်ရင် ဘယ်လိုရောဂါလက္ခဏာတွေ ခံစားရတတ်ပါသလဲရှင်။ နောက်ပြီး ဘယ်လို ဖြစ်တတ်သလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ သမီးက ၃၄ နှစ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လ လောက်က စပြီးတော့ အတူတူနေရင် ဆီးစပ်က ကိုက်ကိုက် လာတတ်ပါတယ်။ အောင့်လဲ အောင့်ပါတယ်။ နေနေတုန်းကိုပဲ အောင့်တက်လာလိုက် ပျောက်သွားလိုက်နဲ့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ နောက်ပြီး ထမင်းစားပြီးလို့ရှိရင် ဗိုက်က အရမ်း တင်းပြည့်ပြီး နေလို့ထိုင်လို့ မရအောင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နဲနဲပဲစားလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ များများစားလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုက်က ပူပူနေပါတယ်။ အခုက အစာစားစား မစားစား အမြဲပူနေပါတယ်။ စားပြီးလို့ရှိရင်တော့ အရမ်းကိုတင်းပြည့်နေသလို ခံစားရပါတယ်။ နောက်ပြီး ရာသီလာခါနီး ဆက်ဆံရင် ဆီးစပ်ကိုက်တာနဲ့ ဘယ်လိုမှ နေလို့ မရတော့ လောက်အောင် ဖြစ်ဖြစ်လာပါတယ်။ OG နဲ့ ပြသင့်ပါသလား။
• Ectopic Pregnancy ထူးဆန်းသည့် ကိုယ်ဝန် ကို ဖတ်ပါ။
• ဆေးစစ်ဘူးသလား။ အာလ်ထွာဆောင်း ရိုက်ဘူသလား။ ရာသီဆင်းရင် နာတတ်သလား။ အဖြူဆင်းသလား။
• ဗိုက်ပူတာမှ ကိုယ်ဝန်မရှိတာကို ဖယ်ထုတ်ရမယ်။ သေခြာချင်ရင် Urine for pregnancy test ဆီးစစ်ပါ။ နောက် ကိုယ်ဝန်မဟုတ်ရင် လေ၊ အစာခြေလမ်းကို စဉ်းစားရမယ်။ လိုအပ်ရင် Antacid သောက်ပါ။ လိုသေးရင် Digestive enzyme ကို ထမင်းစားပြီး တကြိမ်စီ သောက်ပါ။
• ရာသီလာချိန် ကိုက်တာမျိုးအတွက် Pain killer တခုခုသောက်ပါ။
• မေးတာတွေ ပြည့်စုံမှ ထပ်ဖြေပါမယ်။
Q 2: ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ ပါးစပ်သုံးတာ မြင်ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့သူက ပါးစပ် မသုံးချင်ဘူးတဲ့။ တခြားနည်းလမ်းရှိလား။ ပြီးတော့ သူပစ္စည်းက ပိတ်နေပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လုပ်ရပါသလဲ။ ဆေးစားလို့ ရသလား။ ဘာဆေးလဲ၊ ဆေးနာမည်ပြောပြပါ။ မဆက်ဆံဘဲနဲ့ ကလေး ရနိုင်သလား။ တကယ်လို သူအပေါက်ပိတ်နေရင် ကလေး ရနိုင်ဖို့ခဲယဉ်းသလား။ ကလေးရဖို့က လိင်ဆက်ဆံတာနဲ့ ဆိုင်ပါသလား၊ ပြောပြပေးပါ။
• မရှင်းတာလေး ပြောပါအုံး။ မေးတဲ့သူက နာမည်အရ ယောက်ျားဖြစ်မှာဆိုတော့ သူက ဆိုတာ မိန်းကလေးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူ့ပစ္စည်းက ပိတ်နေတယ် ဆိုတာ ဘာလဲ။
• မိန်းကလေး အပေါက်ပိတ်တယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာလဲ၊ သားအိမ်အဝလား၊ သားအိမ်ပြွန်လား။ မွေးလမ်းကြောင်း ပိတ်တာဆိုရင် လိင်အင်္ဂါထိုးသွင်းလို့ကို မရနိုင်ပါ။
Q 3: ကျွန်တော်က အသက်၂ဝ ပါ။ ညားခါစ အိမ်ထောင်သည် တယောက်ပါ။ အမျိုးသမီးကလည်း အသက် ၂ဝ ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူက ကျောင်းသူတယောက်ပါ။ အတူတူမနေကြပါဘူး။ သူရှိတဲ့မြို့ကို ကျွန်တော်က တလကို ၄ ရက်လောက် သွားတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို သူမ ကျောင်းတက်နေချိန်မှာ ကလေး မယူချင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆေးခန်း သွားပြီး ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးရန် တိုက်တွန်းတဲ့အခါ သူမက ရှက်သည်ဆိုသောကြောင့် မဆွေးနွေးရသေးပါ။ ရေးထားတဲ့ ကိုယ်ဝန်းတားဆေးများအကြောင်းလဲ ဖတ်ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဥာဏ်မမှီပါဘူး။ ကျွန်တော် လိုချင်တာက ဥပမာ တခါ ဆက်ဆံပြီးရင် တလုံး သောက်ရမဲ့ဆေးမျိုးကို လိုချင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးကို တလလုံး သောက်ရမဲ့ ဆေးမျိုးမဟုတ်ပဲ တခြားနည်းလေးများရှိရင် ညွှန်ပြစေလိုပါတယ်။
စာဖတ်ပြီးရင် နည်းအမျိုးမျိုး တွေ့မှာပါ။ တခါဆက်ဆံ တခါသောက်ရတဲ့ အရေးပေါ်တားဆေးကိုလဲ ဖတ်ပါ။ အရေးပေါ် အတွက်သာ တခါတလေ သုံးဘို့ ကောင်းတယ်။ အဲဒါကို မေးထားတာတွေ ဖြေတာလဲ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဖတ်ပါ။ ဆောရီး ကျွန်တော်က စာရေးမကောင်းဘူး။
Q 4: ကျွန်တော် အသက် ၂၈ ပါ။ လူလွတ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး (့) မှာ နေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်က အဖော် တစ်ယောက်နဲ့ အကာအကွယ်မဲ့ ဆက်ဆံခဲ့မိတယ်။ နေနေပြီးချင်း နောက် တစ်ရက်။ နှစ်ရက်လောက်မှာ လိင်တန်ရဲ့ အရင်းနားနဲ့ အလယ်နား ဝန်းကျင်တွေမှာ တခုခု ဖြစ်နေသလို စတင်ခံစားခဲ့ရပြီးတော့ ဆီးမကြာမကြာ သွားချင်တဲ့ ခံစားမှုမျိုး ခံစားနေရပါတယ်။ ဒါက ဂနိုကျချင်တာမျိုးများ ဖြစ်နိုင်မလား သိချင်ပါတယ်။ အခု ၂ ပတ်အကြာ အထိတော့ ဂနိုကျသလို ထိပ်ဖျားမှာ ယိုစိမ့် ထွက်တာမျိုးလည်း မရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဆီးကတော့ ခဏခဏလို သွားချင်တဲ့ ခံစားမှုမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်လို့ ဂနိုကျတာမျိုး ဖြစ်လာရင် ပနယ်စလင်နဲ့လည်း မတည့်ဘူးဖြစ်နေတော့ အလွယ် ဝယ်သောက်လို့ရမယ့် ဆေးလေး ညွှန်းလည်း သိချင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကျော်ကလည်း အဲ့ဒီလို တခါ ဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ ရန်ကုန်က ဆေးခန်းတခုမှာ ပြခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ဆရာဝန် ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးညွှန်း အခုအချိန် သိမ်းထားပါတယ်။ ဆေးညွှန်းကို မဖတ်တက်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဆေးညွှန်းကိုလည်း တွဲပြီး ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆေးဆိုင်းတွေမှာ သွားပြပြီး ဝယ်လို့လည်း အဆင်မပြေဖြစ်နေတာကြောင့် (့) မှာ ဝယ်လို့ လွယ်နိုင်ရမယ့်ဆေး ညွှန်ကြားစေချင်ပါတယ်။ ဆက်ဆံစဉ်တုန်းက ပြီးတဲ့အချိန်မှာ အပြင်ထုတ်ပြီး လက်နဲ့ လုပ်လိုက်ပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုက ၄ ကြိမ် လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းနဲ့ပါပဲ။ လိင်ဆက်ဆံဖော်ကိုလည်း ဘယ်လိုမေးရမှန်း မသိ၊ အားတုံ့အားနာ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် လမ်းညွှန်ပေးပါ။
ဆေးညွှန်း အဟောင်းထဲမှာ ဆေး ၂ မျိုးပါတယ်။
Azicure (Azithromycin) နဲ့ Oflamac (Ofloxacin 200mg) ဖြစ်တယ်။ ပနယ်စလင် မတည့်သူလဲ သောက်နိုင်တဲ့ ပဋိဇီဝဆေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးဆိုင်မှာ အခုရေုးပြသလို မေးဝယ်ရင် ရပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ လိုသေးရင် မေးပါ။
8 Apr 11, 07:23
Q 5: ဆရာရှင့် အရေးပေါ်တားဆေးက ပထမအလုံးက ဘယ်အချိန်မှာ သောက်ရမှာပါလဲရှင့်။ ဆေး ၂ လုံးက သောက်တဲ့ တရက်တည်းကို အာနိသင် ဖြစ်တာလား၊ နောက်တရက် ထပ်ဖြစ်ရင် နောက်တရက် ထပ်သောက်ရမှာလားရှင့်။
လိင်ဆက်ဆံ ပြီးနောက် ၇၂ နာရီ (၃ ရက်) အတွင်း ပဌမဆေး ၁ လုံးသောက်ပါ။ နောက် ၁၂ နာရီခြားပြီး ဒုဆိယဆေး ၁ လုံး ထပ်သောက်ပါ။ ဆေး ၂ လုံးသောက်ထားရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ၃-၅ ရက်အတွင်း ဆက်ဆံမှု အားလုံး အကြုံးဝင်တယ်။ ဆေး ၂ လုံး သောက်ထားတဲ့နောက် နောက်ထပ် ဘယ်နှစ်ရက်အထိ ကာကွယ်မယ်ဆိုတာ မသေခြာပါ။
1. Emergency Contraception (1) အရေးပေါ်တားဆေးများ (၁)
2. Emergency Contraception (2) အရေးပေါ်တားဆေးများ (၂)
3. Ecee2 ဆေးဆိုတာ တွေကိုလဲ ဖတ်ပါ။
Alex: မင်္ဂလာပါ မတွေ့ရတာကြာပြီနော်
Nicky: ဟုတ်တယ်ဗျ၊ မင်္ဂလာပါအစ်ကိုရေ
Alex: လန်းတယ်ကွာ ဆံပင်တွေတောင် အညိုရောင်ပြောင်းပြီး နည်းနည်းရှည်နေတယ်ဒီဇိုင်းက။ မင်းဒီည အလုပ်မသွားဘူးလား ဂျစ်တူး?
Nicky: မသွားဘူးအစ်ကို၊ စကားမစပ် ဒီည connection ကောင်းတယ်ပေါ့? Vzo ကလည်းကြည် အသံကလည်း မပြတ်တော့ဘူး
Alex: ဒါပေါ့ အဲဒါကြောင့် ဆောင်းပါးတွေ ကိုယ့် blog မှာလာတင်တာညီရ။ မင်းပြောစရာရှိတယ်ဆိုပြောလေ...
Nicky: ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ညီ ဒီရောက်မှ gay ဖြစ်သွားပြီထင်တယ်။ အစ်ကိုအထင်မသေးပါဘူးနော် ညီ့ကို ခင်ဦးမှာပဲ မဟုတ်လား?
Alex: အထင်သေးရမယ် ဘာကိုအထင်သေးရမှာလဲညီ? ၊ Gay..? ဘာဖြစ်သေးလဲ....ဒါကိုအထူးအဆန်းလို့ အစ်ကို မခံစားခဲ့ဖူးဘူးကွ။ ပုဂ္ဂလိကရွေးချယ်ဖြစ်တည်မှုလို့ ဆိုနိုင်မလားဘဲ။ ဒါလည်း မသေချာပါဘူးလေ။ ညီ ပျော်တယ်မဟုတ်လား? ဒါပဲအရေးကြီးတယ်
Nicky: ဟုတ်ကဲ့အစ်ကို.....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ညီ့ရဲ့ ညလေးတစ်ညအကြောင်း ပြောပြမလို့ပါ။ စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းလဲ နားထောင်ပေးနော်
Alex: အိုကေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်
ဒီည စနေညတစ်ညဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က A.G.C Club (All Gay Club) မှာ bartender တစ်ယောက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့်နာမည် Nicky ပါ။ မြန်မာနာမည်ရင်းတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ အရပ် ၅ ပေ ၁၀လက်မဆိုတော့ နည်းနည်းနိမ့်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပေ မယ့် ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေက အညိုရင့်ရောင် ခပ်ရှည်ရှည်ပေါ့။ အညိုဖျော့ရောင် ညှို့မျက်ဝန်းတစ်စုံနှင့်အတူ အပြုံးလှလှကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်က သွယ်လျပေမယ့် အချိုးကျလှပသည်လို့ဆိုနိုင်တာ အမှန်လေ။ ကျွန်တော့် အသွင်အပြင်က Zac Efron နှင့်အတော်ဆင်ပါရဲ့။ လူအချို့က ကျွန်တော့်ကိုသူနှင့်မှားတတ်ကြပေမဲ့ မကြာခင် မဟုတ်မှန်းသိသွားတာက အာရှသားမို့ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်က gay မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်လိင်မှုခံစားချက်ကို ရှာဖွေနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖန်ခွက်တွေကို ကျွန်တော် သန့်စင်အောင် အ၀တ်စဖြင့် ပွတ်သပ်နေစဉ်မှာ အရပ်ရှည်ရှည် ဆံနွယ်ခွေကောက်ကောက် ကြွက်သားအဖုဖု နှင့် sexy ဖြစ်တဲ့ လူရွယ်တစ်ယောက် ကျွန်တော့်ဆီလျှောက်လာပြီး စကားပြောပါတယ်။ 'ဟေး, ကိုယ်လမ်းတချို့ကို မသိလို့ မင်းလမ်း ညွှန်ပေးနိုင်မလား?'
'ကောင်းပြီလေ ငါသွားချင်တဲ့နေရာကို လိုက်ပြပေးနိုင်ရင်တော့ tip money ပေးပါ့မယ်'
ကျွန်တော့်အလုပ်က နောက် ၅မိနစ်လောက်ကြာရင်ပြီးတော့မှာ။ ပြီးတော့ ဒီနေ့ tip money များများမရသေးဘူးဗျ။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်က သူ့ကို 'သေချာတာပေါ့ ဘော်ဒါရာ၊ ခင်ဗျားက ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲ?' လို့မေးလိုက်တယ်လေ။
'ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပေးမယ်ကွာ ဒီမြို့ကို မင်းလိုက်ပြီး ပြသမယ်ဆိုရင်' သူ့မျက်နှာမှာ အပြုံးတစ်ချက်ပေါ်လာရင်း ပြောတာဗျ။ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀က တော်တော်များတာပဲ iPhone4ကိုဝယ်ဖို့ ငွေလုံလောက်တာပေါ့နော်။ 'သေချာတယ်ဗျာ သွားကြစို့' ကျွန်တော်စိတ်အား ထက်သန်စွာနဲ့ ပြောလိုက်ပါရဲ့။ ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်က apron ကိုပြန်ချွတ်ကာ အင်္ကျီချိတ်မှာချိတ်ပြီး သူနှင့်အတူ သူ့ကားရှိရာကို လိုက်သွားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဆောက်အဦးအပြင်ဘက်ကို လျှောက်လှမ်းလာခဲ့စဉ်မှာ သူပြောတာက 'ငါ့ကောင် မင်းကို ကြည့်ကြည့်နေတာကြာပြီ မင်း ဘယ်နားမှာနေတာလဲကွ' ကျွန်တော်နေတဲ့ နေရာအမှန်ကို သူ့ကိုမပြောပြချင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို အတော်စုတ်တဲ့ တိုက်ခန်းလေးတွေရှိရာ ရပ်ကွက်တစ်ခုရဲ့ တစ်ခုသော တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာနေလို့ပေါ့။ 'ကျွန်တော် ဒီဝန်းကျင်က တိုက်ခန်းတစ်ခန်းမှာနေတာ' 'တကယ်? ငါကတော့ မီယာမီမှာနေတာလေ။ ဒီနေရာကနေ ၄နာရီလောက် မောင်းသွားရင်ရောက်ပြီ'
'ဒါဆို ဒီနေရာကို ခင်ဗျားဘာလာလုပ်တာလဲဗျ?' ကျွန်တော့်မျက်နှာမှာ စူးစမ်းမှုပါဟန်အကြည့်နဲ့ မေးလိုက်တယ်။ သူက 'အပြင်လော ကကို ခဏထွက်ဖို့ ငါ့အတွက် လိုနေလို့ပေါ့ကွာ' တဲ့ဖြေတာက။
ကျွန်တော်တို့ နောက်ဆုံး သူ့ကားစီကို ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ အနက်ရောင် 2010 Lexus ကားတစ်စီးပေါ့ မြင်လိုက်ရတာက။
'ဒါကို မင်းအရမ်းကောင်းတယ်ထင်တာပေါ့လေ ငါ့ရဲ့ ferrari ကားကို လိုက်ကြည့်သင့်သေးတယ်' သူ့မျက်နှာမှာ အပြုံးတွေဝေပြီး စကား တွေပြောတာ။ ကျွန်တော်တို့ကားထဲ အလျင်စလို ၀င်ပြီးကြတဲ့နောက်ပိုင်း ချက်ခြင်းလိုလို သတိထားမိတာက ကားမောင်းသူရဲ့အပေါ် ဘက် ဘေးမရောက်တရောက်နောက်ကြည့်မှန်ရဲ့ ရှေ့မှာ ကင်မရာတစ်ခုဗျ။ ပြီးတော့ ရှေ့ခန်းကားထိုင်ခုံနှစ်ခုကြားမှာ ရေခဲသေတ္တာ အသေးစားလေး မြင်မိချိန်မှာတော့ ကင်မရာအကြောင်း ကျွန်တော်မေ့သွားရော။ သူ ကားမောင်းသူနေရာမှာထိုင်ပြီး ခါးပတ်ပတ်လိုက်ချိန် မှာ မေးလိုက်ပါတယ် 'ဘယ်နေရာကို ခင်ဗျားသွားချင်တာလဲဗျ?' လို့။ သူက 'အခုတော့ ဟိုသည်လျှောက်မောင်းကြတာပေါ့ကွာ ငါတို့ စကားစမြည်ပြောလို့ရတာပေါ့ 'တဲ့။ ပခုံးတွန့်လိုက်မိကာ ကျွန်တော်ပြောမိတာက 'ok sure' ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ စကားစလိုက်တာက တော့ မီယာမီ မှာရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ အိမ်တော်ကြီးအကြောင်း၊ သူ့ရဲ့အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ လုပ်ငန်းအကြောင်းအပြင် သူ အခု အမျိုးသား မော်ဒယ်လ်ဘ၀တစ်ခုကို အစပျိုးတော့မယ့်အကြောင်းလည်းပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်အံအားသင့်သွားရတာပေါ့ သူ့လို sexy body ပိုင်ရှင်တစ် ယောက်အဖို့ မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသား မဟုတ်ခဲ့တာကိုလေ။
သူက soda တစ်ခွက်သောက်မလား ဧည့်ခံတယ်။ 'ကောင်းတာပေါ့ဗျ soda တစ်ဘူးဆိုပိုအဆင်ပြေမယ် ဟဲ...ဟဲ' သူရေခဲသေတ္တာလေး ကိုဖွင့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတာက soda သံဘူးတစ်တွဲ၊ ရေတစ်ဝက်ပါတဲ့ ရေဘူးတစ်ဘူး၊ vodka တစ်ပုလင်း၊ vodka နှင့် soda သံဘူးတွဲကြားမှာ soda တွေငှဲ့ထည့်ထားပြီးသား ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ရှိနှင့်နေတယ်ဗျ။ သူက အဲဒီဖန်ခွက်ကို ထုတ်ယူလိုက်ပြီး 'ရော့ ကွာ အလဟဿဖြစ်မှာစိုးလို့တိုက်တာ မဟုတ်ဘူးနော် ။ ဒါက အသစ်ပဲ' တဲ့ပြောတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုဒါဖန်ခွက်ကို ဆွဲယူလိုက်ပြီး အကုန်မျိုချပစ်လိုက်ပါရဲ့။ သောက်ပြီးတော့ ပါးစပ်ထဲမှာ အရသာတစ်မျိုးလို့ ခံစားရပါတယ်။ ကားပြတင်းက တိုးဝင်လာတဲ့လေအေးအေး တွေနှင့်အတူ တဖြည်းဖြည်း အိပ်ငိုက်လာသလို ခံစားရပါပြီ။ ကျွန်တော်နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့10:34 ရှိပြီ။ သူက စကားစတယ် 'မစိုးရိမ် ပါနဲ့ ကွာ သိပ်မကြာတော့ပါဘူး။ မင်းအဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား...' (ကျွန်တော် မျက်စိကိုမှိတ်လိုက်ရုံနှင့် အိပ်မောကျသွားရပါပြီ) .... ကျွန်တော်မကြာခင်မှာပဲ လှိုက်မောညည်းညူသံကို စတင်ကြားနေရပါရဲ့။ အဲဒီအသံက ပိုပိုပြီးကျယ်လာတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ခံစားရ တာက အလွန်နာကျင်တဲ့ ခံစားမှုကို ဖင်ထဲကရရှိနေတာ။ ကျွန်တော့် ခရေ၀ထဲကို တစ်ယောက်ယောက်က ဓားတစ်ချောင်းနဲ့ အထုတ်အ သွင်းလုပ်နေသလိုပါပဲ။ မျက်လုံးတွေကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ပေါ်ကို အုပ်မိုးထားတဲ့ Nate ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို မြင်လိုက်ရတယ်။ အောက်ပိုင်းကို ငုံ့ကြည့်တော့ သူ...သူ ကျွန်တော့်ကို အားရပါးရ -ိုးနေတာ။ ကျွန်တော် အော်ဟစ်ပစ်လိုက်တယ် 'ခင်ဗျား....ကျွန်တော့်ကို ဘာလုပ်နေတာလဲ? ရပ်....အား....အားရပ်ပါဗျ....ကျေးဇူးပြုပြီး....အရမ်းနာတယ်'
ကျွန်တော့်အသက်ရှူသံတွေဟာ ပြင်းထန်လာပြီး လှိုက်ဖိုလှုပ်ရှားလာပါတယ်။ 'AHHH....YEAHH....OHH...GOD! ဒီဖီးလ်သောက်ရမ်း မိုက်တယ် ပြီး....ပြီးတော့မယ်' ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ မသာယာနိုင်ခဲ့ပါဘူး ငိုကြွေးနေမိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို နာကျင်တဲ့ ခံစားမှု ကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မကြာခင်မှာ နာကျင်မှုကနေ သာယာလာသလို ခံစားရပါရဲ့။ ငိုကြွေးမိပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အလို မတူ စော်ကားခံရသလို ထိန်းချုပ်ခံရတယ်လို့လဲ ခံစားရလို့ပါ။ သူ့နှုတ်ခမ်းက မိန်းမောညည်းညူသံဟာ ကျယ်သထက်ကျယ်လောင်လာ တယ်။ များမကြာမီမှာတော့ ပူနွေးတဲ့ အရည်တွေဟာ ကျွန်တော့်တင်ပါးအကွဲကြောင်းမှတစ်ဆင့် ကားဆိုဖာဆီ စီးဆင်းသွားတာကို ခံစား လိုက်ရပါပြီ။ အားလုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ နာကျင်မှုတွေ သာယာမှုတွေ အဝေးရောက်သွားချိန် ကားတံခါးဘောင်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ကိုယ့်လက်ကို သတိထားမိပါတယ်။ 'ကျွန်တော့်ကို ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ Nate? ဘယ်နေရာကို ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာလဲ အိမ်ပြန်ချင်တယ်ဗျာ' လေသံပျော့နှင့် သူ့ကိုပြောရခြင်းပေါ့။ကျွန်တော့်မှာ ငိုကြွေးအော်ဟစ်ခဲ့ရလွန်းတော့ လည်ချောင်းတွေက နာနေပြီ လေ။ 'ညက ငါ့ကိုယ်ငါမထိန်းနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ မင်းကိုသဘောကျနေတာကြာပြီလေ။ ဒါကြောင့် ငါ့ပိုင် ပစ္စည်းလုပ်လိုက်တာ' သူက ညှို့ငှင်သံအပြည့်ဖြင့်ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော် အချိန်ကိုကြည့်လိုက်တော့ မနက်ခင်း ၅း၃၀ဖြစ်နေပြီ လေ။ ပြီးတော့ GPS ကိုထပ်ကြည့်ပြန် တော့ ကျွန်တော်တို့ မီယာမီကို ရောက်နေပြီတဲ့။ 'ဟာဗျာ...ဘာကြောင့် ကျွန်တော့်ကို ဒီအထိ ခေါ်ခဲ့ရ တာလဲဗျာ ကျွန်တော့်ကိုမှ....' ကျွန်တော် ၀မ်းနည်းသံတွေ စကားလုံးမှာ ပေါ်သွားတယ်။ 'မင်းက ငါ့အတွက် ထာဝရဖြစ်သွား ပြီ။ ငါတို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တွေ့ဆုံသိကျွမ်းပြီးသားကို ဆိုလိုတာပါ။ ငါ့ကိုခွင့်လွတ်ပါကွာ။ မင်းက ငါ့အတွက် ပျော်ရွှင်မှုတွေ ကို ပေးစွမ်းပါတယ်'
သူ ကျွန်တော့်တင်ပါးအစုံကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်ကိုင်ကာ ငပဲကို ခပ်ဖြေးဖြေးဆွဲထုတ်ပါတယ်။ မြင်ရတဲ့ ငပဲဆိုဒ်ကြီးက မျက်လုံးပြူးစရာပါ။ တုတ်တယ် နောက်ပြီး ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားရော။ သူ..သူ ကားရှေ့ထိုင်ခုံစီ ကျော်ခွသွားလိုက်ပြီး ကားစက်နှိုးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကားပြတင်းကကြည့်လိုက်တာမှာ ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုအနီးက ကားပါကင်မှာ ရပ်နားထားခြင်းတဲ့။ အော်ဟစ်ခဲ့ရလို့ မောပန်းနေပြီမို့ ကျွန်တော့်မျက်လုံးများကို မှေးမှိတ်လိုက်မိပါရဲ့။ ခရေ၀ထဲက နာကျင်နေတဲ့ခံစားမှုကိုရနေပါသေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ခဲ ပေမဲ့ ကျွန်တော် အိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်။ တံခါးကို ဆောင့်ဖွင့်သံကြောင့် ကျွန်တော်နိုးထရပါရော။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ငုံ့ကြည့်တော့ ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်မနေပါ။ သူပြန်ဝတ်ပေးထားတာဖြစ်မယ်။ တံခါးဘောင်မှာ တွဲချည်ထားတဲ့ကြိုးကို ကြိုးစားပြီးဖြေတာပေါ့ ဒါမှ ကျွန်တော် ထွက်ပြေးလို့ရမယ် မဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့ ကြိုးက အရမ်းတင်းလွန်တာကြောင့် လက်ကိုစောင့်ရုန်းရင်လည်း ပြတ်ထွက်သွားနိုင်တယ်။ ကျွန်တော့် ခြေရင်းက တံခါးကို ဖွင့်ကာ ကျွန်တော့်လက်ကကြိုးတွေကို လာဖြည်ပေးရော။ တွန်းတိုးပြေးထွက်ဖို့မလွယ်အောင် ကျွန်တော့် လက်မောင်းကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ချုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ သူ့လက်တွေရဲ့ သန်မာမှုကြောင့် တင်းကျပ်နေတဲ့ ချုပ်ကိုင်မှုက တကယ့်ကို နာကျင်ရပါရဲ့။
သူ....ကျွန်တော့်ကို ကားအပြင်ကို ဆွဲထုတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော် ရလိုရငြား တွန်းထိုးရုန်းကန်တာပေါ့။ 'မကြိုးစားစမ်းနဲ့။ မင်းရုန်း ကန်လေ ငါက ပိုချုပ်ကိုင်လေဖြစ်မှာ။ မင်းက ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပဲ အမြဲတမ်းအတွက်'
Alex: အင်း ဒါဆိုအခုမင်း အဆင်ပြေရဲ့လားသူနဲ့ အတူတူနေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့
Nicky: ဟုတ်တယ် အစ်ကို....သူ့မျက်စိအောက်မှာပဲနေထိုင်ရတယ် သူ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကူရတယ်....အခုတော့ သူ့ကိုသံယောဇဥ တွယ်မိသလိုပါပဲ
Nicky: သူ ကျွန်တော့်ကိုလက်ထပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲတစ်မျိုးပဲ....
Nicky ဟုတ်ကဲ့....ကျေးဇူး....ဒါပဲနော် အစ်ကို။ သူပြန်လာနေပြီ...See you next time.....
Alex: Ok, ပျော်ရွှင်ပါစေ....Bye...
Alex Aung (25-6-11)
Posted by Alex Aung at 4:44 PM No comments:
ကျော်ကျော်က ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါပဲ။ ပြီးတော့ စိတ်ကူးယဉ်သောသူပေါ့။ အပေါင်း အသင်းတွေကြားမှာ သူဟာ gay ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ် တစ်ယောက် ယောက်က ပြစ် တင်ပြောဆိုမှာကို သူမတွေးမိဘူးထင်ပါရဲ့နော်။ အသက်က ၂၅နှစ်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ထက် အသက်ကြီးသူပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာ ကျွန်တော့်အတွက် သက်သောင့်သက်သာရှိပါတယ်။ သူနှင့်စကားလက်ဆုံကျတဲ့အခါတွေတိုင်း ကျွန်တော့် အနားကိုတိုးကပ်ပြီး ပြောတတ်တော့ အသံကနုညံ့ချိုသာသလို လှိုင်းတစ်ခုပါနေသည့်အလား ကြားရတတ်တာပါ။ ကျွန်တော် ? ကျွန်တော်ကတော့ Gay ဖြစ်ရခြင်းကို လက်လျော့ထားသူဆိုပါတော့လေ။ ကောင်ကလေးတွေနှင့် ပတ်သက်မိတယ်ဆိုရင်လည်း လျှို့ လျှို့ဝှက်ဝှက်ပေါ့။ straight တစ်ယောက်အသွင်ဟန်ဆောင်နေထိုင်ရင်း။ ကျော်ကျော်ကတော့လား လုံးဝကို ဟန်မဆောင်တာ။
July လ သူ့ဖခင်နှင့် ကျွန်တော့်မိဘတွေ လုပ်ငန်းခွင်က ထွက်ခွာချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဥယျာဉ်ခြံကြီးထဲကို ထွက်ခွာဖို့ အကြောင်းဖန် လာပါတယ်။ သူ့အဖေက တကယ်အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူပါ။ ပျင်းရိဖို့နှင့် ဖင့်နွဲ့လေးကန်ဖို့ အချိန်အား မရှိ သူလေ။ အဲဒါကပဲ ကျွန်တော်တို့အတွက် အလုပ်များစေတာဗျ။ ပဲသီးတောင့်တွေကို အစေ့အဆန်ယူ၊ ပြီးတော့ အခွံအခြောက်တွေကို စုစည်းသည်ဆောင်ပြီးနောက် ကျွဲနွားတွေ အစာဖြစ်တာကြောင့် သိုလှောင်ရာ ဂိုထောင်ကြီးစီကို ပို့ပေးရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦး အသက်ရှူမှား မောပန်းစေမယ့် ဒီဇိုင်းပါပဲ။ ဟီး ဟီး....သူ့သားရဲ့လက်အစုံ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် မရောက်ရှိစေမယ့် အစီအစဉ်ဖြစ် ချင်မှဖြစ်မှာ။ ဒါကြောင့်လည်းအခု ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် စိုက်ပျိုးရေးခြံကျယ်ကြီးထဲ ရောက်နေကြတာလေ။ ပဲခွံတွေကို စုစည်း၊ သယ်ဆောင်မယ့် နောက်တွဲယာဉ်ပေါ်တင်၊ ခြေဗလာနှင့် ဟိုသည်သွား၊ ပူကလည်းပူပြီး ချွေးတွေ တစ်ကိုယ်လုံး ရွှဲနေတာ အင်္ကျီကိုယ်မှာ မကပ်ဘဲ ဂျင်းဘောင်းဘီကိုယ်စီပဲရှိတော့တယ်။
'မင်းက အကုန်ကြည့်ကောင်းတယ်နော်၊ မင်းရော မင်းညီမရော' သူက အေးအေးသက်သာ စကားဆိုတယ်။ ကျွန်တော် အဝေးကိုပဲ ငေးနေလိုက်တာပေါ့။
'မင်းတို့ တစ်မိသားစုလုံးက အတော်ချောကြတာ' ကျွန်တော်ဘာပြောရမှန်းမသိ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ပါးပြင်က ရဲရဲနီနေမှာကို ခံစားမိရပါ ရော။
ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်ခုံးနှင့် ရင်အုပ်တွေက ချွေးသီးနေပေမယ့် ကျွန်တော်ပိုမိုကြိုးစား ဖြစ်တာပါပဲ။ အလုပ်ကြိုးစားတာက ကိုယ့်လုပ်အားခလေး နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ရတာကို တန်ဖိုးထားချင်လို့လေ။ အိမ်မှာအလကား လက် ဖြန့်တောင်းရတာ အမြဲတန်းဘယ်ကောင်းမလဲ။
နောက်တွဲယာဉ်ပေါ် ပဲခွံတွေတင်နေရာက သူခုန်ဆင်းသွားကာ စပါးကျီနံရံနားသွားရပ်ကာ သေးပန်းပါတယ်။ မသိမသာ မျက်လုံးစွေပြီး ခိုးကြည့်တော့ ခပ်လျောလျောဖြစ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီနောက်ပိုင်းကနေ သူ့တင်ပါးအထက်ပိုင်းကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြင်ရသား။ ဒီကောင် ချောကြီးရဲ့ boyfriend ဆိုရင် သူ့ကိုပိုင်ဆိုင်ရလို့ ကျေနပ်ဂုဏ်ယူမှာပဲ။ ဟာ....ကျွန်တော် ခိုးကြည့်တာကို သူသိတယ်ဗျ။ မျက်လုံးခြင်း ဆုံကြည့်ရင်း အားရပါးရပြုံးပြသလို သူ့ငပဲကိုမြင်သာအောင် ဘေးတိုက်ရပ်ကာ သေးပေါက်ပြတယ်လေ။ အံအားတသင့်ဖြစ်မိသလို ရှက် လည်းရှက်မိ သွားတာကြောင့် တစ်ဖက်ကိုမျက်နှာလွှဲပြီး အလုပ်ကိုသာ အာရုံစိုက်လိုက်မိပါတယ်။
ကျွန်တော် ပဲခွံတွေကို ကြိုးကြိုးစားစုစည်း နောက်တွဲယာဉ်ပေါ်ကိုပဲ အာရုံစိုက်ကာတင်နေပေမယ့် ကျွန်တော့်နောက်ကျောပြင်ကို သူ အာရုံစိုက်နေတာ ခံစားရသလိုပါ။ နောက်တွဲယာဉ် ဘောင်ပေါ်တင်ထားတဲ့ T-shirt ကို လှမ်းယူပြီး သူ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့ ပြုံးနေတာများ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ အပြုံးမျိုးပေါ့။ ဆက်လုပ်လေကွာ တဲ့သူကပြောသေး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မှာ သက်သောင့်သက် သာဖြစ်သလို မခံစားရတာကြောင့်ရော ခပ်ကြပ်ကြပ် ဂျင်းဘောင်းဘီကိုဝတ်ထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းက နည်းနည်းပြောင်းလဲ လာတာကြောင့် တီရှပ်ကိုဝတ်ဖို့ကြိုးစားမိပါတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှ အပူငွေ့ကို အနီးကပ်ခံစားရသလို သူ့မျက်လုံးတွေက ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးအား ခရီးထွက်နေတာကို အလိုလိုခံစားသိမိပါတယ်။ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလာရသလိုပါပဲ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်ဝန်းအောက်မှာ နေထိုင်ရတာ။ ပဲခွံတွေကို သုံးလေးခါလောက် ခြင်းနှင့်သယ်ပြီး နောက်တွဲယာဉ်ထဲထည့်တာကို လုပ်မိလုပ်ရာ သဘောမျိုးလုပ်လိုက်သေးကာ ထိုင်ချလိုက်ပါတယ် မြေပြင်ပေါ် ခြေပစ်လက်ပစ် မောပန်းစွာ။
'မင်းကို ဓာတ်ပုံတစ်ပုံလောက်ရိုက်ရင် စိတ်မဆိုးပါဘူးနော်' သူ စပါးကျီကို နောက်မှီရပ်ရင်း ကျွန်တော့်ကိုမေးတယ်။ ကောက်ရိုးထုံးတွေ၊ ပဲခွံတွေကြား အပြစ်ကင်းနေထိုင်သွားလာတဲ့ဟန်တွေကို သူ့ကင်မရာနှင့် ပုံဆွဲချင်တာပါ။ ရုတ်တရက် အညောင်းဆန့်သလို ထရပ်လိုက် ရင်း ဘောင်းဘီဂွဆုံကိုပင့်ပြီးနောက် ဘောင်းဘီအောက်အနားကိုခေါက်ဖို့ဟန်ပြင်စဉ်မှာ နံရံမှာချိတ်ထားတဲ့ အိတ်ထဲက သူ့ကင်မရာကို အမြန်ယူကာ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရအောင် သူယူတယ်။ ဟန်တွေပန်တွေနှင့် မနေရပါပဲ ဓာတ်ပုံဆရာ သဘောကျရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးကို ကျွန်တော်သဘောကျပါရဲ့။ သူ ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်တန့်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မိသားစုဓာတ်ပုံဆို အိုကေလေ။ အခုတော့ ကျွန်တော် ဘယ်မှာ No လို့ပြောရပါ့မလဲ။
သူက တစ်ကြိမ်ထက်ပိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဆိုတာကိုး။ သူ စကားပြောရင် များသောအားဖြင့် တိုးတိုးညှင်းညှင်းနဲ့ စကားလုံးတွေကို ရွေး ချယ်ပြီးပြောတာပါ။ သူက အထူးတလည် သဘောကျတဲ့အရာတွေ လူတွေကိုမှ ဓာတ်ပုံရိုက်တာဆိုပဲ။ ဘာကြောင့်ဆို သူတို့က အာရုံ ထဲမှာ အလွန်လှတယ်လို့ ခံစားရလို့ပါတဲ့။ သူက ကျွန်တော့်ကိုအတွင်းခံဘောင်းဘီနှင့် နှစ်ပုံလောက်ရိုက်ချင်သေးတယ် အဓိပ္ပာယ် အများကြီးရှိပါသတဲ့။ သူ အဲဒီလို ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီး တခြားသူများကိုပြလေ့မရှိဘဲ သိမ်းထားတတ်တာပါတဲ့လေ။ ပြီးတော့ သူပြောဖို့ ကျန်သေးတာက သူဟာ နဂိုဗီဇအရကို ဓာတ်ပုံရိုက်တာမှာတော်တယ်ဆိုတာ။ သူ့ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ကိုယ်ဟန် ကျွန်တော်မပြပေးခဲ့ဘူး။ ဟန်တွေဆောင်မနေဘဲ သဘာဝအတိုင်း အပြစ်ကင်းကင်း နေလိုက်ခြင်းက သူ့ကို ကျေနပ်မှုပေးမှာပါ။
ကျွန်တော့်ကို သူဖြစ်ချင်တာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတောင်းဆိုတာ ကျွန်တော်နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဖြစ်ဘူး အထူး တလည် သူ့ရဲ့မှတ်ချက်များအပေါ်။ သူဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီရဲ့ ဂွဆုံက အမြှောင်းကြီး လှုပ်ရှားနေတာက ကျွန်တော့်ကို အရှက် ပိုစွာဟန်တွေမဆောင်ဖို့ သူ့ရဲ့သဘာဝကျကျနေထိုင်မှုကို ပြတာပဲဖြစ်မယ်။ သူ့အတွက် ကျွန်တော့်ရင်ထဲခံစားမှုတွေ ဖြစ်တည်လာပြီ ထင်ပါတယ် ပြင်းပြတက်မက်မှုတွေနှင့်ပေါ့။ သူဘယ်လိုခံစားနေရသလဲဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော်သိပါတယ် ဘယ်လိုတည်ငြိမ်မှုတွေ ပျက်ပြားလာပြီလဲလို့။
ခံစားမှုတွေ မှားယွင်းမနေတော့ဘဲ ဂျင်းဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မာန်ပါပါနှင့် စကားလုံးနုတွေဖြင့်ပြောတဲ့ ဘယ်လို pose ပေးရမယ် လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သူ့စကားတွေကို လိုက်နာလိုက်တာပေါ့နော်။ သူ့ကို အကဲခတ်ကြည့်တော့ အသက်ရှူတာကို ခက် ခက်ခဲခဲ လုပ်ဆောင်နေရပြီး တံတွေးကိုလည်း မနည်းမျိုချနေရပုံပါ။ ကောက်ရိုးမျှင်ကြမ်းကြမ်းတွေဟာ ကျွန်တော့်အရေပြားတွေကို ပွတ် သပ်နေ ကြသလို ပါးလွှာလွန်းတဲ့ချည်သားအတွင်းခံကလည်း အ၀တ်ဗလာနည်းပါး ဖြစ်သယောင်ဖန်ဆင်းပါတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည် မှုအ ပြည့်ဖြင့် ကင်မရာခလုပ်ကို ဆက်တိုက်နှိပ်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်သိတာပေါ့ ကျွန်တော်ဟာ sexy body ပိုင်ရှင်ဆိုတာ။ မိန်းကလေးတွေ ပဲဖြစ် ဖြစ် ယောက်ျားလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အားကျနှစ်သက်ကြတာကို ခံရခြင်းက ဆေးတစ်ခုလို စွဲလမ်းနှစ်သက်စေပါတယ် ကျွန်တော့် အတွက်။ ပူလောင်တဲ့ မီးတောက်တစ်ခုကို ဆော့ကစားသလိုများ ဖြစ်နေပြီလားပဲ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အာရုံစိုက် ကြည့်ခံရတာများ ကြောင့်လားမသိ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ အသက်ဝင်ကာ ရှင်သန်လှုပ်ရှားလာပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်း ဖောင်းကြွလာတာကြောင့် ဘောင်းဘီ အသားနှင့် ခန္ဓာကိုယ်က ကွက်တိဖြစ်နေရော။
အဲတာကြောင့် မတ်တပ်ရပ်ပြီး သူ့ဘက်ကို ကျောပေးလိုက်ကာ ပို့စ်တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်။ သူက ကင်မရာနှင့် တစ်ချက်နှစ်ချက်ရိုက်ပြီးနောက် ကျွန်တော့်ကိုရပ်တန့်ငေးမောနေရဲ့ ခဏာတာပေါ့။ ဘေးတစ်စောင်းရပ် သူ့ဘက်ကို လည်ပြန်ကြည့် ရှေ့ကိုအနည်းငယ်ကော့ကာ အတွင်းခံဘောင်းဘီမော်ဒယ်လ်တွေရဲ့ ဟန်အတိုင်း နောက်တစ်မျိုးနေပေးလိုက်တယ်။ တဖျပ်ဖျပ်နဲ့ ဒေါင့်ပေါင်းစုံက ကင်မရာဖြင့်မှတ်တမ်းတင်၏။ သူ့ဘက်မျက်နှာမမူတော့ဘဲ အဝေးကိုကြည့်ကာ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို အောက်ကို အနည်းငယ်လျောလိုက်ကာ ပေါ်လာတဲ့ တင်ပါးအကွဲကြောင်းတလျှောက် သူခဏကြည့်နေပြီးမှ အသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပြန်ကာ အသက်ရှူသံမြန်လာတာ နားနဲ့တောင်ကြားရပါရဲ့။
ကျွန်တော့်ဗိုက်ကြွက်သားတွေကိုပြဖို့ စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။ လှပတဲ့အစိတ်အပိုင်းကို သူများကိုပြရတာ ပျော်တယ်လေ။
အဓိပ္ပာယ်လွဲတဲ့ အချက်ပြမှုမျိုး ကျွန်တော်ပြခဲ့မိသလား? ကျွန်တော်မသိပါ။ ဒါပေမဲ့ သန်မာတဲ့ သူ့လက်မောင်းအစုံနဲ့ ဖျစ်ညှစ်မိကို ခံစား လိုက်ရချိန်မှာ အသည်းအသန်ထိတ်လန့်အေးခဲသွားမိပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်လည်တိုင်နှင့် ကျောပြင်တလျောက်ကို စိုစွတ်တပ်မက် တဲ့ အနမ်းများပေးတာလေ။ ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်သလို ခဏငြိမ် သူ့ရဲ့တောင်းပန်စကားကို စောင့်ဆိုင်းတဲ့သဘောပေါ့။ သူ့ရဲ့ ဂျင်း ဘောင်းဘီသားတွေဟာ ကျွန်တော့်ပေါင်တံကို ကပ်နေသလို သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်အနောက်ဘက်ပိုင်းအနှံ့ နုညံ့စွာ ခရီးထွက်ပါရော။ ကစားရုံလေးဆိုကောင်းပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်အခုရပ် သူ ကျွန်တော့်ကိုတောင်းပန်လိမ့်မယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန်အခြေ အနေဆီပြန်သွားပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် ဖြားယောင်းမှုတွေလည်း အဆုံးသတ်တော့မှာပါနော်။
ဒါပေမဲ့ မရပ်တန့်ခဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်နောက်ကျောဖက်ကနေ ပိုမိုဖျစ်ညှစ်သလို လက်မောင်းတွေနှင့် သူ့ရင်ခွင်ထဲဆွဲယူပါတယ်။ ကျွန်တော့် လည်တိုင်ကို တကယ့်ဖွဖွညင်သာစွာ နှုတ်ခမ်းများဖြင့် ပွတ်သပ်၊ လျှာဖျားလေးဖြင့် တို့ထိကာ ကြက်သီးမွှေးညင်း ထစေပါရော။ သူ့ရဲ့ တခြားလက်ကတော့ ချွေးစိုနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေကို ပွတ်သပ်ချော့မွေ့စေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဗိုက်ကြွက်သားအံစာတုံးတွေမှ တစ်ဆင့် မာတောင်နေတဲ့ ငပဲကို ဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ ခပ်ဖွဖွဆုပ်ကိုင်သေးတာ ဆက်လက်ပြီးတော့လေ။ မိနစ်အတော်ကြာ အဲဒီ အခြေအနေအတိုင်းရှိနေတာပါ။ သူ့လက်တွေဟာ ဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးကြားထဲကနေ လျှိုဝင်ကာ အတံနှင့်တကွ ရွှေဥတွေကို လက် ချောင်းလေးတွေနှင့် ကစားတယ်။ ကျွန်တော့်ထိန်းချုပ်စိတ်တွေ အဝေးကိုပြေးပြီ။ အသက်ရှူသံပြင်းလာသလို သွေးသားဆန္ဒ ဆာလောင် မှုတွေက ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းထဲပြည့်နှက်လာပါရော။ ကျွန်တော် လဲကျသွားပြီထင်ပါ့။ ကျွန်တော် လူတစ်ယောက်တလေနဲ့မျှ မပတ်သက် ခဲ့မိတာ တစ်နှစ်ကျော်ကြာပါပြီ။ အခုအချိန်လေးဟာ တွေဝေမှုနှင့်အတူ ရုန်းကန်နေရတဲ့ အခါသာမယပါပဲနော်။ သူ့ရဲ့ မွန်းလွဲချိန်ဟာ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နှင့်အတူ ဆက်လက်ဆွဲဆန့်ပါတယ်။ မာတောင်ဖောင်းကားနေတဲ့ သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီဂွဆုံကို တင်ပါးတွေကို အားပြု ကျွန်တော့်တင်ပါးဖြိုးအိအိတွေကို ဖိဖိပြီး ကပ်တယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အထိ ကျွန်တော်တို့အနေအထား မပြောင်း။ ကျွန်တော့် ထိတ်လန့်မှုဟာ ပြီးသွားပါပြီ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သွေးတွေပိုမိုပူနွေးလာကာ ရင်ခုန်ရမှုတွေက မဟုတ်ဘူး..... ဟုတ်တယ်.....ဘာကြောင့် မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ? ကျွန်တော့်ကြွက်သားတွေဖြေလျော့ထားရင်း သက်သောင့်သက်သာဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ တယ် သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ လက်အစုံနှင့် နှုတ်ခမ်းများရဲ့ ဦးဆောင်မှုနောက် ငြင်သာစွာ ရွေ့ပေါ့။
သူ ကျွန်တော့်ကို ဖက်တွယ်ရင်း ကောက်ရိုးထုံးတွေထားတဲ့အခန်းဘက်ကို တွန်းရွှေ့ခြေလှမ်းစေကာ ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ စီစီရီရီ ထားထားသော ကောက်ရိုးထုံးအချို့ပေါ် ကျွန်တော့်ကိုလှဲစေပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ခြေချင်းဝတ်ကနေ သူ ဆွဲချွတ်ပေးတော့ မာ တောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲနှင့် သူ့ပါးစပ်နားကပ်သွားသလို ဖြစ်ရရဲ့။ ပက်လက်လှန်ထားသော ကျောပြင်မှ ကြမ်းရှရှအထိအတွေ့က လည်း ခံစားမှုကို တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်စေပါတယ်။ သူ့ဦးဆောင်မှုမှာမျောနေရင်းမှ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအတွက် ကိုယ်ဟန်ပြနေခြင်းဖြစ် ကြောင်း သတိရမိပေမယ့် သူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုမှာ အလွန်ကိုကျွံဝင်သွားပြီပေါ့လေ။ သူ ကျွန်တော့်အတွက် အမှန်တရားတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ပါ တယ်။ သူ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကို အကြမ်းပတမ်းဆွဲချွတ်လိုက်တာကြောင့် ခပ်တုတ်တုတ် သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော့်ကို တည့်တည့်မတ်မတ် ချိန်ရွယ်နေရော။ ထိပ်အရေပြားကနေ ရုန်းထွက်နေတဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းဟာ ဖောင်းကြွပြီး ခရမ်းရောင်သမ်းနေတာဗျ။ ပုံသဏ္ဌာန်အတော် လှတဲ့ဟာ။
ဒါပေမဲ့ အခုလောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော့်အသားချောင်းကို သူလိုအပ်နေခဲ့တာပါ။ ဖြေးဖြေးလေးမှ တကယ့်ဖြေးဖြေးလေး ငုံစုပ်နေ တာ အတော်ကျေနပ်ဖို့ကောင်းသလို ကျွန်တော့်ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ပေါက်လေးကို သူ့လျှာနှင့် တို့ထိကစားနေတာ၊ ရွှေဥတွေကို လျှာနှင့် တစ်လုံးခြင်းလျက်တာ အားလုံးကလည်း နှစ်သိမ့်ကြည်နူးစေရော။ ကောက်ရိုးမျှင်တွေနှင့် ဖုံးနေသော ညစ်ပေသော အင်္ဂတေကြမ်းပြင် ပေါ် ကျွန်တော့်ကိုဆွဲချလုံးထွေးလိုက်ပါတယ်။ နှစ်ဦးသား ဖက်ပြုရင်း လှိမ့်လိုက်တာ နောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့ သူကအပေါ် ကျွန်တော်က အောက်က ပက်လက်ဆိုတဲ့ အနေအထားပေါ့။ ခပ်ဖူးဖူး ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို သူ့ပါးစပ်ဖြင့် အပြည့်စုပ်ယူသည့် အပြင် လျှာအရှည်ကြီးကလည်း အာခေါင်အနှံ့ကစားနေတာ။ နှုတ်ခမ်းခြင်းထိကပ်ကစားနေကြတာဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုပူးကပ်တာမှာ ဖုဖုဖောင်းဖောင်းတုတ်ခိုင်တဲ့သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော့်ညီဘွားနှင့် ဖက်လဲတကင်းဖြစ်နေတာဗျ။ သွေးတွေဆူပွက်ပြီး ဘာမှမလုပ်ရသေးပဲနှင့် ဒီအနေအထားနှင့်ပင် ပြီးဆုံးချင်သလို ခံစားရပါတယ်။
ကောက်ရိုးထုံးတွေကြားလှဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုယ်မှာ ကောက်ရိုးမျှင်တွေ အမှုန်အမွှားတွေနှင့် ဖုံးနေတော့ အသက်ရှူရတာ မောပါ့။ သူ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကာ ပေါင်ကြားထဲမှ ငပဲကြီးက ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းစွာ တဖြည်းဖြည်းထွားတက်လာလိုက်တာ လန့်မိသလိုလို ကျေနပ်အားရသလိုလို ဖြစ်မိပါတယ်။
'မင်းသိလား ငါမင်းကို အမြဲသဘောကျနေခဲ့တာ၊ မင်းကိုလိုအပ်နေခဲ့တာ၊ ပြီးတော့ မင်းရဲ့ခပ်သေးသေးဖင်လေးကို -ိုးချင်နေခဲ့တာလေ'
ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိ ကျွန်တော့်မျက်နှာတော့ အတော်ပူသွားမိတယ်။ သူ့ငပဲကြီးက အကြောတွေထောင်နေသလို ထိပ်အရေပြားက လည်း ကွမ်းသီးခေါင်းကို အတင်းဆွဲထားရဟန်ထူပါရဲ့။ ကျွန်တော် အဲဒါကြီးကို လက်နဲ့အသာထိကိုင် လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်း တွေနှင့် ပူနွေးတဲ့အသားချောင်းကို ငုံထွေးလိုက်ပါရော။ ပါးစပ်ကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ကာ အကုန်လုံးမျိုချလိုက်ဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်။ ရုတ်တရက် သူ အဲဒါကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ဆွဲယူသွားရင်း ညစ်ပတ်နေတဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ကျွန်တော့်အားတွန်းလှဲလိုက်ပါတယ်။ မကြာခင် မှာတော့ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေလေပေါ်မြှောက်တက်သွားပါ၏။ သူ့မျက်နှာဟာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံဆီကို နီးကပ်လာတယ် ဗျာ။ ပထမတော့ ငြင်သာစွာ လျာနှင့်တို့တို့ပြီး လျက်တာပေါ့။ နောက်တော့ရွှေဥတွေကို အားရပါးရ တပြွတ်ပြွတ်စုပ်တော့တာ။ 'အာ...အ...ရှီး' ကျွန်တော့်တင်ပါးအကွဲကြောင်းတလျှောက်ကို ပူနွေးနေတဲ့လျှာကို အပြားလိုက်ကပ်ကာ အသည်းယားအောင်လုပ်တယ်။ တဖြည်းဖြည်း နှင့်လျာကို အတောင့်လိုက်မာအောင်လုပ်ကာ ခရေ၀ထဲကို ဖိဖိသွင်းတာ ထုတ်တာများ မေ့ပျောက်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကြက်သီးထဖွယ် ခံစားမှုဆီ ပြန်ခေါ်ဆောင်သွားသလိုပါ။ သူ့အပြုအမူတွေက ဒီအချိန်မှာ ဘယ်သူက ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်ကိုပြသနေတာပဲ။
သူ့ ဂျင်းဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲက တစ်ခုခုကို ယူနေတယ်၊ condom တစ်ခု၊ Lube အထုပ်တစ်ခု။ သူ အားလုံးအစီအစဉ်ရှိနေခဲ့တာ လား? သူအဲဒါတွေကို နေရာတိုင်း ယူသွားနေတာလား ဟွန်း...အတော်နှာဗူးကျတဲ့လူပဲ။ သူ့လက်ချောင်းတွေမှာ ချောဆီဆွတ်ကာ ကျွန်တော့်ခရေ၀မှာ ပွတ် သပ်ရွှဲစိုစေတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေ သူ့ပခုံးပေါ်နေရာယူစေကာ သူ ဒူးထောက်လိုက်ရော။ သူ့မျက်နှာမှာ ပျော်မြူးရိပ် သန်းတဲ့အပြုံးတစ်ချက်ဝင့်လာသလို ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ တစ်စုံတစ်ခုတိုးဝင်လာတာကို ခံစားရတာပေါ့နော်။
'အ' နည်းနည်း အကြမ်းပတမ်းဆန်ကာ ညင်သာမှုသိပ်မရှိ။ အားနှင့် အင်နှင့် ဖိသွင်းလိုက်တာ။ ချွေးတွေ ဖုန်တွေနှင့် စီးကပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာ စိတ်ဇောဟုန်တွေ တွန်းကန်ရုန်းကြွလာစေတယ်ထင်ပါ့။ ခရေ၀နှင့်အပြည့် တင်းကျပ်နေတာကို ခံစားရသလို ချောဆီအကူအညီကြောင့် နာကျင်မှုလျော့ကာ စိတ်ထဲပီတိစိတ်တွေ ၀င်လာလိုပဲ ခံစားရပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းဆိုသလို အဆုံးထိဝင် သွားတာ ငပဲဆိုဒ်ကြီးတာ ဘာမှမဟုတ်တော့သလို ခံစားရပါတယ်။ ခေါင်းငုံ့ပြီး အထုတ်အသွင်းအဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားနေတဲ့သူ အခုတော့ ကျွန်တော့်မျက်နှာဆီမော့ကြည့်ကာ မျက်ဝန်းတွေကို စူးစိုက်ကြည့်ရဲ့။ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် သူ့ရွှေဥတွေ ဟာကျွန်တော့်တင်ပါးကို ရိုက်ခတ်တာများ အသံတောင်ထွက်တယ်။ ကျွန်တော် သူ့ကိုယ်ပေါ်က ကြွက်သားထုတွေကို အာရုံရောက်မိ ပါရဲ့ ချွေးတွေရွှဲနေတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အမြှောင်းမြှောင်းထနေသလို မွတ်သိပ်တမ်းတတဲ့ အကြည့်တွေက ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကနေ အကြည့်လုံးဝမလွှဲပါဘူး။ ကျွန်တော် သူ့ခါးအစုံကို လက်နှင့်ဆွဲကိုင် ကာ တင်းပါးတွေကို အလိုက်သင့်လှုပ်ရှားမိရင်း ပြင်းထန်တဲ့လှိုင်းလုံး ကြီးထဲ မျောပါရတာ အတော်ကောင်းပါတယ်။ သူ တဖြည်းဖြည်းနှင့် တော့ စည်းချက်ကျကျလှုပ်ရှားလာပါပြီ။ အဆုံးထိသွင်းထုတ်မှန်မှန် လုပ်လိုက် ခပ်သုတ်သုတ်လေးဆောင့်သွင်းပြီး မွှေလိုက်နဲ့ပါပဲ။ စိုက်ပျိုးရေးခြံရဲ့ ကောက်ရိုးထုံးတွေ သိုလှောင်ရာ အဆောက်အဦးထဲက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ တိရစ္ဆာန်တွေလို အရှက်မဲ့စွာကြမ်းတမ်းနေကြ ပါတယ်။ guy-on-guy sex က တခြားနှင့်မတူ ပြင်းပြကြမ်းရှပါရဲ့။
ကျော်ကျော် သူ့ရဲ့ tempo မြင့်ပြီး အဆုံးသတ်ဖို့နီးလာတာကြောင့်ထင် ခပ်မြန်မြန်ဆောင့်သွင်းနေချက်ကို အရှိန်လျော့ကာ ဖြည်းဖြည်း အေးအေး တစ်ချက်ခြင်းလုပ်နေပါရော။
'မင်းအပေါက်ကလည်း ကြပ်လိုက်တာကွာ...ခပ်များများ -ိုးပေးမှနဲ့တူတယ်....ဟီး'
ကျော်ကျော့်ဆီက အသက်ရှူသံ...ညည်းညူသံတိုးတိုးတို့ကို ကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့အပြင် အသံစိမ်းတစ်ခုကို ကြားလာရသလိုပါပဲ။ Land Rover ကားတစ်စီးရဲ့ တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတဲ့အသံ။ ကျော်ကျော်ခမျာ တစ်ဝက်တပျက်နှင့် ဗျာများသွားသလို နှစ်ဦးစလုံးကြား ရတဲ့အသံကို နားစွင့်နေမိကြပါတယ်။ တံခါးခေါက်သံကို ကြားရရော။
သွားပြီ.....ကျွန်တော်တော့ ပက်ပင်းမိခံရတော့မယ်။ ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကို သိုဝှက်ထားပေးမယ့်သူဖြစ်ပါ့မလား အသက် ၃၀ ၀န်းကျင်လူတစ်ယောက် ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အခန်းရဲ့တံခါးကိုဖြတ်ပြီး ပိန္နဲပင်တွေဘက်ကို လူရှာထွက်သွားရဲ့။ 'ကျော်ကျော်?' သူ အသံတိတ်နေတယ်။ သူ့ငပဲက ပိုမိုမာပြီး လှုပ်ရှားနေသလိုပဲ အတွင်းထဲမှာ။ ကျွန်တော့်ခရေ၀ကြွက်သားတွေကလည်း ပိုမိုဖျစ်ညှစ်မိပါရဲ့။ အန္တရာယ်က စိတ်တွေကို ပိုမိုလှုပ်ရှားစေသလားနော်။ ခဏနေကလူ ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ အခန်းရဲ့တံခါးနားကနေ ဖြတ်သန်းကာ ကား ဆီကိုပြန်လမ်းလျှောက်လာပါတယ်။ အလင်းရောင်နည်းနည်းပဲ ဒီအခန်းထဲမှာ ရှိနေပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အ၀တ်မဲ့နေခြင်း အပေါ် အရှက်သည်းမိသလို ခံစားရသား။ သူကျွန်တော်တို့ကို မြင်နိုင်သလား? တကယ့်နှေးနှေးလေး အထုတ်အသွင်း သူလုပ်နေတယ် ခရေတွင်းထဲ သူ့ငပဲအကြီးစားကြီးနဲ့လေ။ အသံထွက်မှာ စိုးရိမ်တာကြောင့်ဖြစ်မှာ။ သူ အပြင်ကငနဲကြီးနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲ ? သူအမိခံချင်နေခြင်းလား?
သူ့ငပဲကို အဆုံးထိမသွင်းဘဲ ထိပ်ပိုင်းလေးသာသွင်းတော့ကာမွှေနေပါတယ်။ သူ့မေးစိမှ ချွေးတစ်စက်ဟာ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်ပေါ်ကိုကျ တာ မြင်လိုက်ရပြီးနောက် ကျွန်တော့်ကျောရိုးထဲက စိမ့်တက်လာသည်အထိ ကြောက်စိတ်ဝင်လာမိပါပြီ။ သေလောက်အောင်နာပေမဲ့ သူ့ကိုတွန်းတိုး ထထိုင်ကာ ငပဲကိုခရေ၀ထဲမှ ဆွဲထုတ်ပြီး ကျွန်တော့်ဂျင်းဘောင်းဘီကို အသည်းအသန်ဘယ်ရောက်နေလဲသာ အာရုံစိုက် မိပါရဲ့။ သူဒူးထောက်ပြီး ငြိမ်နေတယ်။ သူ့မျက်နှာမှာ အကြည့်တစ်မျိုးတော့ဖြစ်တည်နေသလိုပဲ။ 'ကျော်ကျော်' ကျွန်တော် ခပ်တိုးတိုး အသံကိုနှိမ့်ရင်း အရေးတကြီးခေါ်လိုက်တယ်။ ကောက်ရိုးထုံးတွေနား အ၀တ်အစားမှာရှာမရတာ ဒီအချိန် လူမိသွားလို့ကတော့ ကမ္ဘာ ပျက်ပြီ။
ဒါပေမဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အသံတစ်ခုကတော့ စိုးရိမ်သောကကို ချေဖျက်သွားပါတယ်။ ကားအင်ဂျင်နှိုးသံတစ်ခုကြားရကာ Land Rover ကြီး မောင်းထွက်သွားတော့တာလေ။ ကျော်ကျော်, လူဆိုး အချိန်မဆိုင်း ကျွန်တော့်ခါးအစုံကို ဆွဲကိုင် ကောက်ရိုးထုံးတွေပေါ်လက်ထောက်ပြီး ကုန်းစေတယ် အမြန်။ မာတောင်နေဆဲ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲအပြည့်သိပ်ပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ပခုံးတွေကို အားပြုလိုက် တင်းပါးဆုံကို ကိုင်ကာ ဖျစ်ညှစ်လိုက်နှင့် အရှိန်ရပ်တန့်ရခဲ့ခြင်းအပေါ်အတိုးချယူပါ၏။ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်ဖွယ်အရသာကို ပြန်ခံစားလာရပါ တယ်။ အိုး....ကျော်ကျော် မရပ်လိုက်ပါနဲ့။ မင်းငပဲကြီးနှင့် အားရပါးရ -ိုးလိုက်စမ်း...အာ...အ။ သူ့ရဲ့ပခုံးကို ကိုင်တွယ်မှုက ပိုမိုတင်းကျပ် လာသလို အထုတ်အသွင်းလုပ်နေတဲ့ ငပဲကလည်း ခပ်သွက်သွက်ပဲ ခရေ၀မှာအလုပ်များလာရော။ သူမကြာခင်ပြီးဆုံးတော့မယ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကိုပြောပါတယ်။
'မင်းကိုလည်း ပြီးစေချင်တယ်' လက်နှင့်သူ ကျွန်တော့်ကို မတ်မတ်အနေအထားပြောင်းစေကာ ကျွန်တော့်ငပဲကိုနောက်ကကိုင်ကာ ကစားပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကလည်း အချိန်မကြာခင်မှာပဲ တရားလွန် မာလာပါပြီ။ သူ့လက်က အရင်းကို အားရပါးရကိုင်ကစားနေသလို ထိပ်အရေ ပြားကိုလည်း ပွတ်သပ်လှုပ်ရှားတယ်လေ။ ကျွန်တော်သည်လည်း ခံစားမှုအဟုန်မြင့်လာပြီပေါ့။
ပြန်လှည့်လို့မရတော့ပါဘူး ကျွန်တော့်ပစ္စည်းက အရမ်းမာလာတာ သက်သေ။ ခံစားမှု ကျေနပ်ရမှုဖီလင်က နှစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်နက် ခံစား ရပါတယ်။ ဖီလင်မြင့်လာတာကြောင့် ကျွန်တော့်ခရေ၀ကြွက်သားတွေဟာ သူ့ငပဲကို ပိုမိုဖျစ်ညှစ်ရပါပြီ။'အ...အ...အာ...ရှီး' ကျွန်တော့် ငပဲက သုတ်ရည်တွေ လေထုထဲကို ပန်းထုတ်ပစ်တာ အများကြီးပါပဲ။ အားရပါးရ ပါးစပ်ကလည်း အော်ညည်း ညီဘွားကနေလည်း ကောက်ရိုးမျှင်တွေပေါ် ရေဖြန်းသလို ဆက်ပြီးပန်း။ ကျွန်တော့်ငပဲကအထွက် ရပ်သွားချိန်မှာတော့ သူ့လက်မှာပေနေတာတွေကို သူ အနံ့ခံကာလျာနဲ့လျက်ရင်းမျိုချလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အဆုံးသတ်မှုဟာ သူ့ကိုလည်း အဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်တည်စေပါရော။ 'အား....မင်း ကိုချရတာ သောက်ရမ်းမိုက်တယ်' ကျွန်တော့်ခါးကို ဆွဲကိုင်ဖျစ်ညှစ်ထားတာများ လက်သည်းတွေက ဗိုက်သားထဲမြှုပ်မလားထင်ရတယ်။ မာတောင်လွန်းတဲ့သူ့ငပဲကြီးကိုလည်း ဖြည်းဖြည်းခြင်းတစ်ချက်စီ...'အ'။ အသက်ရှူသံတွေက လှိုက်မောလာသလို သူ့ဒူးတွေလည်း တဆတ်ဆတ်တုန်လာကာ နောက်ဆုံးတစ်ချက် ခါးကော့သွင်းလိုက်တယ် ခရေ၀ထဲကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သူ့ငပဲကိုပေါ့။
ခဏတာငြိမ်သက်ပြီးနောက် သူ့ငပဲကို အသာဆွဲထုတ်သွားတယ်။ နှုတ်ဖျားကတော့ စကားလုံးတစ်လုံးမှ ထွက်မလာဘူး။ ကျွန်တော် လည်း ကုန်းရုန်းထလိုက်ကာ ကောက်ရိုးထုံးတွေကြားက ကျွန်တော့် ဂျင်းဘောင်းဘီကို ရှာဖွေပြီး ညစ်ပေနေတဲ့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ၀တ်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ မတ်တပ်ရပ်ရတာ ဒူးတွေတောင်ချောင်သွားသလားပဲ။ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်နေရာ နောက်တွဲယာဉ်စီ ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။ အလုပ်ကို လက်စသပ်နေတဲ့ ငါးမိနစ်လောက်အချိန်မှာ ခဏနေက Land Rover ကားဟာပြန်ရောက်လာပါရော။ အဲဒီလူက ဒီ စိုက်ပျိုးရေးခြံကြီးမှာ အကျိုးတူလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးတဲ့။ ဟုတ်မှာပါ ဒီခြံကြီးက ဧကအတော်ကျယ်တာ တမျှော်တခေါ်ကြီးဟာ။ သူတို့နှစ်ယောက် တိုင်းရင်းသားအသံဝဲတဲ့ လေသံတွေနှင့် စကားပြောနေကြတာ သဘောပေါက်အောင်မနည်းနားထောင်ရတယ်ဗျ။ ကျော်ကျော် နောက်တွဲယာဉ်ပေါ်က ခုန်ချလာတော့ အဲဒီလူက ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ 'မင်းအလုပ်သမားအသစ်က ဘယ်လိုလဲကွ? ကျော်ကျော် လုပ်အားခမပေးရတဲ့သူများလား?'
'ဟား ဟား..အစ်ကိုကလည်း ကျွန်တော်သူ့ကိုလုပ်အားခပေးပါတယ်'
ကျွန်တော့် ဆံပင်ပေါ်က ကောက်ရိုးမျှင်တစ်ချို့၊ မြေမှုန်တွေ ပေကျံနေတဲ့ နောက်ကျောပြင်၊ စေးကပ်ကပ်ဖြစ်နေတဲ့ အရည်တစ်ချို့ပေနေ တဲ့ ဗိုက်သားပြင်တို့ကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ မလုံမလဲဖြစ်ရပါရဲ့။
အဲဒီနှစ်ယောက်ကတော့ ဘာတွေပြောပြီး သဘောကျနေကြတယ်မသိ တခစ်ခစ်နဲ့နေတာပါပဲ။ပြီးမှ သူတို့ရဲ့ လျှို့ဝှက်သော ဟာသကို ဝေမျှပါတယ်။ သူတို့ဘာတွေထပ်ပြောနေကြတယ်မသိ တစ်ချက်တစ်ချက် မျက်လုံးအကြည့်တွေရောက်ရောက်လာတာ။ ကျွန်တော်အ ဝေးကိုငေးမိနေစဉ်ခဏ သူတို့စကားပြောသံတိတ်ဆိတ်နေတာကြောင့် လှည့်ကြည့်မိတာမှာ မျက်လုံးနှစ်စုံက ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့တက်မက်စွာ စူးစိုက်ကြည့်နေကြတယ်။
ကျွန်တော့်စိတ်အလျှဉ်ကတော့ ရှက်ရွံ့မှုကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးပူနွေးနေတယ်လို့ ခံစားမိပေမဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ထားတဲ့ ပေါင်ဂွဆုံက အတွင်းခံထဲမှ ညီဘွားက တဆတ်ဆတ်နှင့် ခေါင်းထောင်လာပြန်သလိုပါပဲ...။
Alex Aung (18 June 2011)
ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်နိုင်သော နေရာများ၊ ဖုန်းနံပါတ်များ
ဆေးစစ်စာရွက်က အဖြေကို ကြည့်လိုက်တာ HIV Positive ဆိုတာနဲ့ မျက်လုံးပြူးပြီး ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိဖြစ်သွားတတ်ကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ Positive တဲ့လေ။ ကိုယ့်မှာဒီရောဂါ ရှိလာပြီဆိုတော့ ဘ၀မှာ ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရတော့မှာပါလိမ့်၊ မြန်မြန်ပဲသေဆုံးရတော့မှာ လား၊ ငါတော့ ARTဆေးလိုနေပြီထင်တယ်၊ဘယ်ဆေးခန်းကိုသွားပြရင်ရမလဲ၊မိသားစုနှင့်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရပါ့မလဲ စသဖြင့် မေးခွန်း ပေါင်းစုံနှင့် ငိုပွဲဆင်မိကြမှာလည်း အနည်းနဲ့အများပါ။ ဘာကြောင့်ဆို ကုရာနတ္ထိဆေးမရှိတဲ့လေ။ ကာကွယ်ဆေးကလည်း ပေါ်ထွန်းတော့ မယောင်ယောင်ပဲရှိပါသေးတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဗျာ... နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုပေးနိုင်မယ့်နေရာမှာသွားပြီး ဆွေးနွေးကြည့်မယ်....လိုအပ်ရင် သူတို့က ကုသမှုလမ်းညွှန်ပေးလိမ့်မယ်။ မိမိဘ၀မှာ အစကတည်းက မကူးစက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများဖြင့်သာ ဖြတ်သန်းခဲ့မိမယ်ဆိုရင် ဒီလိုဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်...အခုကူးစက်ခံရပြီဆိုတော့လည်း ဘယ်လို နေထိုင်သွားရမယ်ဆိုတာသိဖို့လိုမယ်။ ကဲပါ...ဘော်ဒါတို့ စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ အသက်ဆက်ရှင်ကြဖို့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံပေးတဲ့နေရာလေးတွေဆီသွားကြရအောင်။
မခင်ဋ္ဌေးလွင် - ဖုန်း - ၀၉-၇၃၁၃၂၈၀၅
အမှတ် ၁၉၀၊သပြေလမ်း၊၆ရပ်ကွက်၊ ဝေဘာဂီ၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အမှတ် 12/F ပြည်သူ့လမ်း၊ ၇မိုင်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - ၀၁-၆၆၆၅၃၂၊ ၆၆၅၉၀၄၊ ၆၆၂၄၈၄၊ Ext: 214
အမှတ် - ၁၅၈၊ ကျန်စစ်သားလမ်းသွယ် (၁) လမ်း၊ ထီးလှိုင်ရှင်အိမ်ယာ၊ လှိုင်သာယာမြို့။ ဖုန်း ၀၉၈၅၀၂၉၉၁
Email: newlifefriends@gmail.com, unpositivesupport@unaids.org , aungm@unaids.org
- ခုခံကျနှင့် ကာလသားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး စီမံချက်၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဋ္ဌာန။ ဖုန်း ၃၇၈၆၅၁၊၂၅၁၉၇၃
- ဗဟိုခုခံကျနှင့် ကာလသားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့။ ဖုန်း ၃၈၂၁၀၈
- ဗဟို နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပညာပေးအဖွဲ့။ ဖုန်း - ၃၇၇၉၄၅၊၃၇၀၅၆၈
- ရန်ကုန်ရှိ ခုခံကျနှင့် ကာလသားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့သားများ ဖုန်း - ၀၂-၇၁၁၀၀
-ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းများရှိ ခုခံကျနှင့် ကာလသားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့များ။
- ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ်ဆေးရုံများ၊ ကျန်းမာရေးဋ္ဌာနများ။
- လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များ။
စာကြွင်း။ ။ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်မှာ ဖတ်မိတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှလိပ်စာများကိုပြန်လည်ဝေမျှခြင်းသက်သက်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 2:27 PM No comments:
အမှောင်ရိပ်သိပ်မကဲသေးတဲ့ ညဦးပိုင်းလို့ ကျွန်တော့်ဖာသာတွေးမိပြီး မြေအောက်ရထားရပ်တဲ့ ဘူတာတစ်ခုမှာဆင်းပြီး အလုပ် အမြဲ ရှုပ်နေတဲ့ Manhattan လမ်းကိုရွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သွေးသားသောင်းကျန်းတဲ့၊ ပြင်းပျတဲ့ဆန္ဒတွေထကြွပတ်သက်ချင်စိတ်တွေရှိနေတဲ့ ဒီလို ညမျိုးမှာ အမြဲ လိုလိုအပြင်ကို ထွက်ပြေပျောက်ရာ ပြေပျောက်ကြောင်း ရှာဖြစ်တာပေါ့။ ဟူး....ခပ်ကြပ်ကြပ် Levi's ဘောင်းဘီထဲက မမာ့တမာ ကျွန်တော့် ညီဘွားကလည်း လူအုပ်ထဲ တိုးဝှေ့သွားနေတဲ့ ကျွန်တော့်လိုပဲ တွန်းကန်နေရဲ့။
ကျွန်တော်သွားရမည့်ခရီးအဆုံးက နီးကပ်လာပါပြီ။ ဂျင်းဘောင်းဘီရှေ့ပိုင်းစီကို ကျွန်တော့်ငပဲထိပ်က အရည်ကြည်တွေ စိမ့်ထွက်နေ တယ်လို့ ခံစားမိရသလိုပဲ။ ကျွန်တော် တကယ်တော့နွေးထွေးတဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီတစ်ထည် အောက်က၀တ်ဆင်ခဲ့သင့်တာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုညမျိုးတွေမှာတော့ အထိအခိုက်ခံစားလွယ်သော ခွဆုံကပစ္စည်းကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဂျင်းသားတွေရဲ့ထိတွေ့မှုဖီလင်ကို ပိုချစ်မိပါတယ်။
သွားရမည့်နေရာနှင့်ပိုနီးလေ ခြေလှမ်းနှုန်းကိုပိုမြှင့်မိလေပါပဲ။ ပန်းခြံကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်ခြေလှမ်းတွေက အပြေးတစ်ဝက် ဖြစ်နေပြီ။ မမြင်ရခင်တုန်းကတော့ ဖြည်းဖြည်း၊ မြင်ရတော့မှ အရေးတကြီးဖြစ်မိတာ လူ့စိတ်ထင်ရဲ့နော်။ ဒီ ဗဟိုပန်းခြံက မြေအောက် ဘူတာရုံနှင့် ဘလောက်နည်းနည်းပဲဝေးတာဆိုတော့ အတော်အဆင်ပြေတာ။ ဘူတာရုံမှာ ပတ်တယောင်ရဲတွေနှင့် ရှုတ်နေတာ သူတို့ သံသယဖြစ်စရာလူတွေကို စူးစမ်းဖို့ပေါ့။ အထူးသဖြင့် အေးမြတဲ့ ဒီလိုညမျိုးမှာ သင်္ကာမကင်းဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ ကျွန်တော်တို့လို လူမျိုးတွေကိုဖြစ်မှာ။ ဒါကြောင့် ခြေလှမ်းတွေကို အရှိန်လျော့ပြီး ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရပါတယ်။
ပန်းခြံအစစ်ထဲ ခြေချမိတော့ ခြေလှမ်းနှုန်းကို ပုံမှန်လေးပဲ သွားလိုက်တယ်။ အရမ်းသတိထားစရာဖြစ်ပြီး မှားယွင်းတဲ့လူ၊ ကျွန်တော်နှင့် ကီးမကိုက်မယ့်လူတွေကို စွဲဆောင်မှုဖြစ်သွားစေတာမျိုး မဖြစ်ချင်ဘူးလေ။ ကျွန်တော့်စိတ်ကြိုက်နေရာနားနီးလာတာမှာ အသက်ကိုပြင်း ပြင်းရှူရှိုက်လိုက်မိပါရဲ့။ အ...လေထုထဲမှာ အမျိုးသားပစ္စည်းတွေက ရတဲ့အနံ့မျိုးတွေ လွင့်ပျံနေသလားပဲ။ အများသုံးသန့်စင်ခန်းတွေရဲ့ ရှေ့ ထိုင်နေကျခုံတန်းအရောက်မှာတော့ အေးအေးသက်သာထိုင်လိုက်ပါတယ်။ အခု ပျော်ရွှင်ဖွယ်လေးတွေ စတင်ဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေခြင်း ပေါ့။
ခုံတန်းပေါ်မှာထိုင်၊ ပြီးတော့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကားထားလိုက်တာက ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက မာတောင်ပြီး ဖောင်းနေတဲ့အရာကို စိတ်ဝင် စားသူဆိုရင် မြင်သာနိုင်တာပေါ့။ မိနစ်အနည်းငယ်ဝန်းကျင်လောက်စောင့်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ် ဘေးဘီကို သိပ်မကြည့်ဘဲ။ ခန္ဓာကိုယ် တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်၊ ပါးပြင်တလျှောက်မှာ ပါးသိုင်းမွှေးပါတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက် ကျွန်တော့်နံဘေးမှာ လာထိုင်ပါတယ်။ သူ့မျက်လုံးတွေက ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံစီ တိုက်ရိုက်ပါပဲ။ ကျွန်တော် မျက်လုံးကိုစွေပြီးသူ့ကိုမသိမသာကြည့်တော့ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို လျှာနှင့်သရပ်နေ တယ်။ သူ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ငပဲကိုလိုချင်နေတာ သိသားပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကားထားတဲ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကို စေ့လိုက်ပါ၏။သူက ကြိုက် စရာကောင်းတဲ့ type မှမဟုတ်တာ ကျွန်တော့်အတွက်လေ။ သူ ကျွန်တော့်ဘေးကို တိုးကပ်လာတာပါပဲ။ ကျွန်တော်က ခုံအစွန်းကိုရွှေ့ လိုက်တာကြောင့် စိတ်မ၀င်စားဘူးဆိုတဲ့ သင်္ကေတပြတဲ့ သဘောရှင်းရှင်းလေးပေါ့။
'Cock tease' ခပ်တိုးတိုး သူရေရွတ်ပြီး ထရပ်ကာ အဝေးကိုသူလျှောက်သွားပါတယ် ခဏနေတော့။ ခင်ဗျားဘာသာ ဗလုံးဗထွေးနဲ့ ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော့်ဆီက ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူး။
ခပ်ထွားထွားလူကြီးထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန် မိနစ်အနည်းငယ်ဖြတ်သန်းပြီးနောက် အရပ်ရှည်ရှည် ပိန်ပိန် မိန်းမသွင်ပြင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ခါရမ်းမေ တစ်ယောက်ကျွန်တော့်အနားကို လျှောက်လှမ်းလာပါတယ်။ ရှေ့ခပ်လှမ်းလှမ်းစီ ထပ်လျှောက်သွားပြီးမှ ဟန်မူပါပါ နောက်ပြန် လျှောက်လာပြန်ရော။ သူ နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက် ဟန်ရေးပြနေသေးတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် သူ့ကိုဘာမှ အာရုံစူးစိုက်မှုရှိကြောင်း အမူအယာမပြပါဘူး။ ဟိုလျှောက်သည်လျှောက်ဖြတ်သန်းပြုပြီးနောက် ကျွန်တော့်နံဘေးမှာ ထိုင်ပါတယ်။
'ဟေး....ခွေးပေါက်လေး' သူက ညှို့မြူတဲ့ အသံနှင့်ခေါ်တယ်လေ။ ကျွန်တော်စကားတစ်လုံးမှ မပြောဘဲ တခြားနေရာတွေကိုကြည့်ဟန်ပြု နေလိုက်တာပဲ။
'Hey you! Chico, မင်းကိုပြောနေတာ' ကျွန်တော့်နားတိုးကပ်ပြီးပြောတယ်။
'Hi there' ကျွန်တော် အဖြေသဘောတုန့်ပြန်လိုက်သား။
'ပျော်စရာတစ်ခုခုကို ရှာနေလား ခွေးကလေး' သူကမေးတယ်။
ကျွန်တော် သူ့ကိုအတန်ကြာကြည့်တာပေါ့။ သူ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လူကို ကျွန်တော်က အရှုပ်ကိစ္စလုပ်မယ်များထင်နေသလားမသိဘူး။ မိန်းမကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အစစ်တွေကို ရနိုင်သားပဲ ကျွန်တော့်အရည်အချင်းနဲ့။
'အမ်း....ကျေးဇူးပါ ဘာမှမရှာပါဘူးဗျ' သူ့အပေါ်နဲ့အောက်ကို အကြည့်တစ်ချက်ဝေ့ပြီး ဖြေလိုက်ပါတယ်။
'Fucking pinga!' သူခြေကိုဆောင့်ပြီး ထရပ်ကာ ဆတ်တောက်ဆတ်တောက်နဲ့ ထွက်ခွာသွားပါရဲ့။
ကျွန်တော်နာရီကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ သန်းခေါင်ယံကို မိနစ်၃၀ကျော်နေပါပြီ။ ညက လှပနုပျိုနေတုန်းဆိုတော့ တစ်ယောက် ယောက် ထပ်လာရင်ကောင်းမှာလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ပေါင်ကြားက ကျွန်တော့်ညီဘွားလည်း မျှော်လင့်ချက်ဆုံးရှုံးပြီး ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျ သွားပြီ။ နာရီဝက်လောက်ကြာသည်အထိမျှော်လင့်ဖို့ရှိမလာခဲ့ပါ။ လာတာအချည်းအနှီးဖြစ်ပြီဆိုပြီး သက်ပြင်းချမိစဉ်ခဏ တော်တော် ကြည့်ကောင်းတဲ့ Puerto Rican တစ်ယောက်လမ်းအတိုင်းလျှောက်လာတာကို ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရပါတယ်။ အရပ်နည်းနည်းပုပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ကြွက်သားထုနှင့်အပြည့်။ တောင့်တင်းလုံးဝန်းတဲ့ လက်မောင်းဆုံကနေ လက်ကောက်ဝတ်အနားထိ tattoo ထိုးထားတယ် ဗျ။ ကျွန်တော် ပေါင်တံနှစ်ချောင်းကိုကား လက်တစ်ဖက်ကိုပေါင်ခြံမှာထားလိုက်ပါရဲ့။ သူ့မျက်နှာက ပြုံးသွားက ကျွန်တော့်ကိုဖြတ်သန်း သန့်စင်ခန်းထဲဝင်သွားပါတယ်။
မိနစ်အနည်းငယ်လောက် သူ့ကိုအချိန်ပေးစောင့်ကြည့်ပေမဲ့ မထူးတာကြောင့် အတွင်းဘက်ကို ကျွန်တော်လိုက်သွားမိပါရော။ သန့်စင် ခန်းတံခါးကို တွန်းဝင်လိုက်တော့ အဲ့ဒီလူ ကြွေကမုတ်တစ်ခုမှာ ဆီးသွားနေတုန်း။ ယဉ်ပါးနေတဲ့ အနံ့တွေကလည်းရပါ့။ ကျွန်တော်လည်း သူနဲ့နောက်ကျောကပ်ရပ်က ကြွေကမုတ်မှာရပ် ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖွင့်ကာ ငပဲကိုအပြင်ထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာကို အနောက်ဘက်အနည်းငယ်ယိုင်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီငနဲရဲ့ပစ္စည်းက အထွားသားဗျ။ ကျွန်တော့် အာခံတွင်းက အစာတစ်ခုခုကို တောင့်တမိသလိုမျိုးခံစားရကာ တံတွေးကို မျိုချမိပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ဘက်ကိုဘေးတစောင့်အနေအထားရပ်ပြီး ငပဲကို သူ့လက် ထဲမှာခါပြတာကြောင့် ကျွန်တော်ကလည်း နောက်ခြေတစ်လှမ်းဆုတ်ကာ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုပြလိုက်ပါရဲ့။ သူက ခဏတော့ ရပ်ကြည့်နေ ပြီးနောက် သူ့မြွေဟောက်ကို ဘောင်းဘီထဲပြန်ထည့်ကာ ဇစ်ကိုဆွဲတင်လိုက်ပါတယ်။
'Sup man?' သူက အဲဒီစကားလုံးတစ်လုံးပဲပြောပြီး ကျွန်တော့်နံဘေးမှဖြတ်လျှောက်ကာ တံခါးကနေထွက်သွားပါတယ်။
ဒီနေရာကို သေးပေါက်ရုံသက်သက်ပဲသူလာတာဆိုတာ ကျွန်တော်တော့မယုံနိုင်ခဲ့။ ဘယ်လိုနေရာ ဘာအတွက်လာကြတာများတယ် ဆိုတာကို သူတကယ်မသိခဲ့ခြင်းလား? ကျွန်တော့်လည်းနည်းနည်းပြန်မလာတဲ့ ညီဘွားခေါင်းကို တစ်ချက်ညှစ်လိုက်ကာ ဂျင်းဘောင်းဘီ ထဲ ပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒီညကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ညမဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိပြီး ညစ်ပတ်တဲ့ သန့်စင်ခန်းထဲက ထွက်လာလိုက်ကာ မလှမ်းမကမ်းက ခုံတန်းလျားမှာ ပြန်ထိုင်လိုက်ပါ၏။
နောက်ထပ်နာရီဝက်လောက်ကြာသည်အထိ မြင်ကွင်းထဲကို တစ်ယောက်မှမမြင်။ တစ်ယောက်ယောက်မှ မမြင်ရရင် ဒီနေရာကခွာမှ ပါပဲလေ။ လူနှစ်ယောက်လောက်ဖြတ်သွားပေမဲ့ တစ်ယောက်မှ ကျွန်တော့်အပေါ်အာရုံမစိုက်သွားခဲ့ကြပါ။ ဟိုးခပ်လှမ်းလှမ်းက တောင့် တောင့်တင်းတင်း ဘဲတစ်ပွေ ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ ဘက်ကိုလာနေတာမြင်ရပါတယ်။ ပိုပိုပြီး နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှ သူဟာပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိလာကြောင်းတွေ့ရသား။ သူဟာ ကျွန်တော့်အတွက် တစ်ယောက်များဖြစ်မလား? မျှော်လင့်မိပါရဲ့။
မြင်ကွင်းထဲ ရှင်းနေအောင်မြင်ရချိန်မှာတော့ ဒီလူဟာ ရဲတစ်ယောက်မှန်း သတိထားမိရပါတယ်။ ကျွန်တော်စိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီး ယောင် ယောင်မှားမှားမဖြစ်အောင် ကြိုးစားကာဆက်ထိုင်နေရပါရဲ့။ အသက်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းရှူကာ သက်သောင့်သက်သာနေရုံလေးပေါ့။ အားလုံး ခြုံငုံပြောရရင် ပန်းခြံဆိုတာ လွတ်လပ်တဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ။ အေးအေးသက်သာထိုင်နေလိုက်ပါ သင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို သူတို့ မသိနိုင်ပါဘူး။
သူ ကျွန်တော့်ရှေ့တည့်ရပ်လိုက်ရင်း 'ဟေးကောင်လေး ဒီနေရာမှာ မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ' တဲ့။
'ကျွန်တော်အလုပ်က နောက်ကျပြီးပြန်လာပေမဲ့ ညလေးက လှနေတာနဲ့ အိမ်ကိုတန်းမပြန်ဖြစ်သေးတာပါ'
အဲဒီတော့ သူက အားရကျေနပ်တဲ့အပြုံးနဲ့မေးတယ်။ 'ကောင်းပြီ ,ဒီသန့်စင်ခန်းမှာ လူတစ်ယောက်က သူ့ကိုလက်သီးနှင့်ထိုးတာခံရ လိုက်လို့ဆိုတဲ့ တိုင်ကြားချက်ရလို့လာတာ။ မင်းသံသယဖြစ်စရာတစ်ယောက်ယောက်ကိုများတွေ့မိလား'
လေပျော့ဖြင့် ကျွန်တော်ပြန်ဖြေမိတာက 'မတွေ့မိပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော် ဒီနေရာရောက်တာလည်း မကြာသေးပါဘူး'
သူ ကျွန်တော့်အနားကိုပိုမိုတိုးကပ်ပြီး 'ဒါရယ်စရာကောင်းသားကွ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒီလိုလေသံ ဒီလိုအဖြေမျိုးကြားဖူးနေကြ ပဲလေကွာ'
ကျွန်တော့်အနားကို သူတိုးကပ်လာတော့ စွဲမက်ဖွယ်ကိုယ်သင်းနံ့တစ်မျိုးကို ရှူရှိုက်မိပါတယ်။ သူ့လက်တစ်ဖက်က ပေါင်ခွဆုံကိုထိန်း ကိုင်ပြီး ဘောင်းဘီအနေအထားကို ပြင်တာမှာ ကျွန်တော့်ခမျာအဲဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီး တံတွေးကို ခက်ခက်ခဲခဲမျိုချမိပါရဲ့။
သူ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့အကြည့်တွေနှင့် ငုံ့ကြည့်ပါတယ်။ အဲဒါကကြောက်လန့်ဖို့ကောင်းသလို မြင့်မားသော တဏှာရာဂစိတ်ကို တပြိုင်တည်းလိုလို ခံစားမိစေပါရော။ သူ ကျွန်တော့်စီက ဘာများလိုချင်ခဲ့တာလဲ? ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။ ထိုင်နေ တဲ့ကျွန်တော့်ကို မတ်မတ်ရပ်စေချင်တာလား အခြောက်တစ်ယောက်ကို ထောင်ဖမ်းဖို့ အသေးစိတ်စီစဉ်ထားတဲ့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုလား? ကျွန်တော်ရွေ့လျားမှုလုံးဝမလုပ်မိပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မျက်ခုံးမှာ ချွေးသီးလာတာကို ခံစားရမိပါပြီ။ ပေါင်ခြံကပဲ ယားသလိုလိုနဲ့သူ့ ဘာသူပိတ်သပ်နေတာ ငပဲက ယူနီဖောင်းဘောင်းဘီကိုတွန်းကန်လာသည်အထိပါပဲ။
ကျွန်တော် ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းကိုကိုယ်လျှာနှင့်သရပ်မိပြီး မျက်လုံးအကြည့်ကို တခြားမလွှဲမိပါဘူး။ မီးပုံထဲကို ပူမှန်းသိရဲ့ခုန်ဆင်းနေသူ ကျွန်တော်ပါ။ သူ့ငပဲက ပန်းထွက်လာမည့် သုတ်ရည်တွေကို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေ လျှာတွေပေါ်မှာ အရသာခံစားချင်စမ်းပါဘိ။
'Ha ငါသိပြီ မင်းက စောက်ခြောက်ပဲ' သူနောက်ကိုခြေတစ်လှမ်းဆုတ်ကာပြောတယ်လေ။ အခုမတ်တပ်ရပ်လိုက် သူအော်ပြီးအမိန့် ပေး၏။
ကျွန်တော် သူပြောတဲ့အမိန့်အတိုင်းရှေ့ကဖောင်းကြွနေတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်နဲ့ကွယ်ကာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပါတယ်။ သူကျွန်တော့် လက်မောင်းကနေ အကြမ်းပတမ်းဆွဲကိုင်ကာ သန့်စင်ခန်းဧရိယာထဲ ထွန်းပြီးဝင်စေပါတယ်။
အတွင်းလည်းရောက်ရော ချက်ခြင်းဆိုသလို သန်မာတဲ့ သူ့လက်အစုံနှင့် ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ထိန်းကိုင်ကာ သူ့လျှာအရှည်ကြီး အတွင်းထဲထိသွင်းကာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကိုခပ်ပြင်းပြင်းနမ်းပါ၏။မွတ်သိပ်စွာနှင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း။ သူ့လက်အစုံကိုဆွဲဖယ်ဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားပေမဲ့ လွှတ်မပေးဘဲ ကျွန်တော့်ပါးစပ်တစ်ခုလုံးပါသွားရတော့မလိုထိ သူပြုမူပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာဟန်ချက်ပျက်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်လဲကျရပါတယ်။ ကြမ်းပြင်ကညစ်ပေပြီး စီးကပ်နေပေမဲ့ ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်မိ။
'ဒါပဲပေါ့ ဘာပဲပြောပြော မင်းဘာလဲဆိုတာ' သူက စားတော့ဝါးတော့မယ့်အသံနှင့်ပြောရင်း သူ့ဘောင်းဘီကို ဇစ်ဖွင့် ခပ်ထွားထွားအသား ချောင်းကိုအပြင်ဘက်ဆွဲထုတ်ပါတယ်။ သူ့မျက်ဝန်းတွေကြည့်မိတော့ ဆာလောင်နေတဲ့ အရိပ်အယောင်တွေသမ်းနေပါ၏။ ကျွန်တော် မြင်ဖူးသမျှထဲမှာတော့ အတုတ်ဆုံးငပဲပါပဲ။ သူ့ညာဘက်လက်နှင့် ဖွဖွကိုင်ပြီး ပွတ်သပ်လှုပ်ရှားကစားလိုက်တာ ၇လက်မကျော်အထိ တဖြည်းဖြည်းထွားလာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲက သွားရည်တွေယိုလာသလို သူ့ငပဲရဲ့ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်မှလည်း အရည် ကြည်တွေ စို့ထွက်လာသလားပဲ။ ကျွန်တော် အဲဒါကိုဆွဲကိုင်ပြီး ယူဖို့လုပ်တော့ သူက ပြန်ဆွဲပြီး ကျွန်တော်နှင့်ဝေးအောင်လုပ်ပါတယ်။
'နေပါဦးကွာ' သူကတားမြစ်စကားဆိုရင်း မြင်ကွင်းထဲထင်ရှားလာတဲ့ သူ့ငပဲကိုဆက်လက်ဆော့ကစားပါတယ်။
ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေက ခပ်သွက်သွက်ကစားနေတဲ့ သူ့လက်ထဲကငပဲရဲ့မာတောင်မှုကိုစိုက်ကြည့်နေမိပါရဲ့။ ခပ်တုတ်တုတ်သူ့ငပဲရဲ့ ထိပ်ကအရည်ကြည်တွေဖြစ်တည်လာနေတာကို ကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ဆီအမြန်တိုးကပ်သွားကာ ငပဲရဲ့ထိပ်ကွမ်းသီး ခေါင်းမေးသိုင်းကြိုးကိုလျှာနှင့်သရပ်လိုက်ပါတယ် အရည်ကြည်တွေ အောက်မကျစေရေး။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော့်ကို တွန်းမလွှတ် တော့ပါဘူး။ သူ့ငပဲကို ပါးစပ်ထဲ အတွင်းထိ ခပ်သွက်သွက်သွင်းတာကို ခွင့်ပြုပါပြီ။
'Mmm..yeah, မင်းတို့ စောက်ခြောက်တွေက -ီးစုပ်တာ တော်တော်ကောင်းတာပဲ' သူခပ်တိုးတိုးညည်းရင်းပြောသေး။
ကျွန်တော့် ဦးခေါင်းနောက်ဘက်ကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နှင့်ဖမ်းဆွဲထိန်းကိုင်ရင်း သူ့ငပဲကြီးကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း အစအဆုံးသွင်းတယ်။ ကျွန်တော်အော့အံမလိုဖြစ်ပေမဲ့ သူကလွှတ်မပေးဘဲ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲပိုပိုပြီးသွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်တာဗျာ။
'တခြားစောက်ခြောက်တွေလိုပဲ ဒါကြီးကို ဖင်ထဲထည့်ချင်နေတယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်'
ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို သွက်သွက်ငြိမ့်ပြလိုက်ရင်း 'ဟုတ်ကဲ့' လို့ပြောလိုက်မိပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေထဲက ငပဲကိုဆွဲနှုတ်ရင်း နောက်ကိုခြေလှမ်းတစ်လှမ်းဆုတ်လိုက်ရော။
ကျွန်တော်ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ရင်း ဘောင်းဘီကိုလျှောချွတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ရှေ့တည့်တည့်စီသို့တန်းနေပြီ။ သူ့ မျက်ဝန်းတွေဟာ ပိုမိုအရောင်တောက်လာပြီး အဲဒါကိုကြည့်တယ်။ သိတာပေါ့ ကျွန်တော့်ညီဘွားဟာလည်း သူ့အာရုံကိုစွဲဆောင်နိုင် တယ်ဆိုတာ။ ခဏတော့ကြည့်ပေမဲ့ တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေဘက်သူ အာရုံလွှဲလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း သူနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုလည်း နံရံကဘောင်တန်းတစ်ခုကိုကိုင်လိုက်ကာ တင်ပါးတွေကိုလေထဲမြှောက်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံဟာ မျှော်လင့်စောင့်စားခြင်းနှင့်အတူ အခုန်ကြမ်းလာပါပြီ။ မျက်လုံးအစုံကိုမှိတ်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ခပ်တုတ်တုတ်ငပဲကြီး ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ တိုးဝင်လာမှာကိုစောင့်နေမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခဏကြာတော့ ကျွန်တော့်တင်ပါးအကွဲကြောင်းတလျှောက်မှာ တစ်စုံ တစ်ခုကိုပွတ်သပ်ဖိနှိပ်ပြီးသွင်းနေတာကို ခံစားလာရပါရော။ အဲဒီအရာက ကျောက်ဆိုင်လိုမာပြီး အေးစက်နေတာ။ ကျွန်တော်နောက် ဘက်အနည်းငယ်စောင်းလှည့်ကြည့်တော့သူ့ခါးမှာချိတ်ဆွဲထားခဲ့တဲ့ နှစ်ဆယ့်လေးလက်မရှိမယ့် ရာဘာတုတ်နှင့် ထိုးသွင်းနေတာတွေ့ ရပါတယ်။
'မင်းက ခပ်တုတ်တုတ်ကိုကြိုက်တယ်မဟုတ်လား' သူက စကားပြောလည်းပြော ရာဘာတုတ်ကို ပိုမိုနှဲ့ပြီးသွင်းတယ်ဗျ။
ကျွန်တော့်မှာ နာကျင်ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်အတူ ရာဘာတုတ်နဲ့အ-ိုးခံနေရတာ။ ကျွန်တော် နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်မိသလို နာကျင်မှုနဲ့အော်ဟစ် မိပါသေးတယ်။ အချိန်အတော်ကြာတွင်းချဲ့နေပြီးနောက် ရာဘာတုတ်ကို သူ့ခြေထောက်နားပစ်ချလိုက်ပါရော။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ သူ့ငပဲ ကို condom စွပ်ကာ ကျွန်တော့်တင်ပါးအစုံကို ဆွဲထိန်းပြီး ကိုယ်ပိုင်ငပဲနှင့်စတင်သွင်းပါတယ်။ သူ့ငပဲခပ်တုတ်တုတ်ကို ဖိပြီးနှဲ့နေတာ တစ်ချောင်းလုံးဝင်သွားသလားပဲ။ ရာဘာတုတ်နှင့် ယှဉ်ရင် သူ့ဟာကသွင်းဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ကျွန်တော်သူ့လက်ကိုနောက်ပြန်ကိုင်ပြီး ဖျစ်ညှစ်မိသလို တင်ပါးတွေကိုလည်း အလိုက်သင့်ကော့ကော့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်။
သူ့ငပဲကွမ်းသီးခေါင်းဟာ ချိန်ရွယ်ထားတဲ့ ပစ်မှတ်ကိုမှန်အောင်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချက်ဆိုတစ်ချက် သွားသွားထိတာကြောင့်ရင်ထဲ ဟားကနဲဖြစ်ဖြစ်သွားကာ ထိန်းထားတာတွေ ရှုံးသွားတော့မလိုပါပဲလေ။ သူ့ငပဲဟာ ပိုမိုကြီးထွားလာသလို ခံစားရတဲ့အပြင် ကျွန်တော့် ရဲ့လျှို့ဝှက်အမှတ်ကို ဒင်ပြည့်ကျပ်ပြည့်သွားသွားထိပါတယ်။ ပူနွေးတဲ့ သူ့သုတ်ရည်တွေအတွင်းထဲမှာပြည့်သွားသလိုခံစားရချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်ငပဲထိပ်ကသုတ်ရည်တွေဟာ သန့်စင်ခန်းကြမ်းပြင်စီအကုန်ကျဆင်းကုန်ပါပြီ။ တစ်လျော့ပြီးတစ်လျော့ သူသွင်းနေသလားပါပဲ။ ဘယ်တော့မှမရပ်တော့မယ့်အတိုင်း ဆက်လှုပ်ရှားနေတာပါဗျာ။
သူ့သုတ်ရည်တွေအကုန် ကျွန်တော့်ခရေတွင်းထဲပစ်သွင်းပြီးချိန်မှာ သူ့ငပဲကို အားနဲ့ဆွဲထုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာကြမ်းပြင်ပေါ်က သုတ်ရည်တွေပေါ် ဒူးထောက်ကျမိပါရော။ သူကတော့ ခပ်မတ်မတ်ပြန်ရပ် ငပဲကိုယူနီဖောင်းထဲပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က တော့ သေဆုံးတော့မလို မောပန်းမှုနှင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်လှဲလျောင်းနေမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်တင်ပါးတစ်ဖက်ကို သူ့ရာဘာတုတ်နှင့် ခတ် ဆတ်ဆတ်ရိုက်ပြီး ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ 'မင်းကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုပေးနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်'တဲ့လေ။ ပြီးတော့ 'နောက်တစ်ကြိမ် မင်းကိုမမြင်ချင်ဘူး ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ကြိမ်ဆို မင်းဒီတစ်ချောင်းလုံးအသွင်းခံရမယ်' လို့ပြောပြီးထွက်ခွာသွားပါတယ်။ သူ့ခြေသံတွေ ခြေလှမ်းတွေပျောက်သွားတဲ့အထိ လှဲနေမိပါရော။ နက်ဖြန်ည ကျွန်တော် ဘယ်နေရာမှာ တစ်ယောက်ယောက်ကို စောင့်လိမ့်မယ်ဆို တာကို စာဖတ်သူအနေနဲ့ လောင်းနိုင်ပါပြီ ။ ။
Alex Aung (2 –6-2011)
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၅၃)
Mar 30, 2011 at 8:14 AM
ကျွန်တော့် အသက်က အခု ၂၅ နှစ်ပါ။ သုတ်လွှတ် အရမ်းမြန်ပါတယ်။ သုတ်လွှတ်စောခြင်းကို ဖတ်ပြီးပါပြီ။ လိင် ဆက်ဆံတာ တစ်ခါလည်း မကတော့ပါဘူး။ မရေတွက်နိုင်လောက်အောင် ရှိပါပြီ။ အရက်သောက်ပြီး ဆက်ဆံ တာတောင် အလွန်ဆုံးကြာ ၅ မိနစ် ၁ဝ မိနစ် ပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရင် ကောင်းမလဲလို့ ဖြေကြားပေးပါ။ အရက် မသောက်ပဲ ပုံမှန်ဆို ဘယ်လောက်မှ မကြာဘူး။ တကယ့်ကို ခဏလေးပါပဲ။ အရမ်း စိတ်ညစ်နေရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သုတ်လွှတ်မြန်အောင်ကုတဲ့ ဆေးခန်းတွေ ရှိပါတယ်။ ကုလို့ရော ရပါ့မလား။ မကြာခင် အိမ်ထောင် ပြုတော့မှာ ဖြစ်လို့ စိတ်ပူနေတာပါ။
သုတ်လွှတ်စောတာကို ဆေးစာနဲ့ Rapid ejaculation, Rapid climax, Premature climax, Early ejaculation နာမယ်တွေရော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တာတွေရော အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ တချို့က အင်္ဂါထိုးသွင်းမှု ဖြစ်ပြီးနောက် ၂ မိနစ်ထက် စောတာကိုမှ အဲဒါလို့ ခေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၅ဝ မှာ Alfred Kinsey က သုတေသန လုပ်တော့ လူ ၄ ယောက်မှာ ၃ ယောက်က သူတို့ အတွေ့အကြုံပေါင်း တဝက် ကျော်ကျော်မှာ အဲလိုဖြစ်နေပါသတဲ့။ နောက်သုတေသနတခုမှာ လူ ၇၅% က ၁ဝ မိနစ် အတွင်း သုတ်လွှတ်တယ်လို့ သိရတယ်။ အမေရိးကားမယ် လူပေါင်း ၂၅-၄ဝ% မှာ အဲဒီလို ဖြစ်နေကြပါတယ်။
"ကိုယ့်ဆက်ဆံဘက် အဖေါ်ထက် စောပြီးတာကိုသာ ခေါ်ပါမယ်" လို့ Masters and Johnson က ဆိုထားတယ်။ အဲလိုဖြစ်တာလဲ အကြိမ် ၁ဝဝ မှာ ၅ဝ ဖြစ်ပါသတဲ့။
ကနေ့ Sex therapists လိင်အထူးကု အများစု ပြောတာက Lack of ejaculatory control သုတ်လွှတ်မှာကို ထိန်းထားနိုင်စွမ်းဟာ ယောက်ျား-မိန်းမ တဦးမဟုတ် တဦးမှာ Sexual or Emotional well-being လိင်စိတ်နဲ့ သာယာမှုကို Interferes အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေတာလို့ ဆိုပါတယ်။ အရေအတွက်ရော အရည်အသွေးပါ အကြုံးဝင်တယ်ပေါ့။ ရွှေဗမာတွေဆီကရတဲ့ မေးခွန်းတွေအရ မတိုင်ခင် တင်ကူးပြီး အစိုးရိမ်ကြီးနေတာကိုပါ ဒီအထဲ ထည့်ရမလို ဖြစ်နေတယ်။
မကြာသေးခင်က အသက် ၁၈ နှစ်ကနေ ၅ဝ ကြား ယောက်ျားတွေမှာ အမျိုးသမီး အင်္ဂါထဲမှာ သုတ်မထွက်စေအာင် ထိန်းထားနိုင်တဲ့ Latency time အချိန်ဟာ ၆ မိနစ်ခွဲလို့ Quantity အရေအတွက်ပိုင်းအရ ပြောတယ်။ Quality အရည်အသွေးကိုပါ ထည့်တွက်ရမှာပါ။ သုတ်လွှတ်ချိန်က ၁ မိနစ်ခွဲသာရှိပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်က ကျေနပ်ကြသလို၊ ၃ မိနစ်သမားတွေထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကျေနပ်သူတွေ ရှိတယ်။ ဒါမျိုးကိုသာ ဝေဒနာသည်အုပ်စုထဲ စာရင်းသွင်းပါတယ်။
ဘာလို့ အချိန်တိုရသလဲ စိတ်နဲ့ ဝန်းကျင်ကို အရင် ရိုးမယ်ဖွဲ့ရပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ Sexual performance လိင်ဆက်ဆံမှု ဖြစ်စဉ် နဲ့ Emotional well-being စိတ်ယာယာမှုတို့ရဲ့ Relationship ဆက်စပ်မှုကို Underestimate လျော့တွက်မိရင် ဖြစ်တတ်တယ်။ ဥပမာ Temporary Depression ခဏခေတ္တ စိတ်ဓါတ်ကျနေချိန်၊ Stress စိတ်ဖိစီးမှု ကဲနေချိန်၊ Unrealistic expectations about performance တကယ်မဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ စွမ်းဆောင်မှုကို စိတ်ကူးယဉ်တာ၊ History of sexual repression အရင်ကလဲ လိင်စိတ် ဖိစီးခံရမှု ရှိခဲ့တာ၊ Overall lack of confidence ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့တာတွေကြောင့် ဒီလိုဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။
နှစ်ဦး နှစ်ဘက် (ဖိုနဲ့မ) ကြား လှုတ်ရှား ပြောင်းလဲနေတဲ့ Interpersonal dynamics သဘောကနေ Sexual function လိင် ဆက်ဆံရေးကို အမျာကြီး သက်ရောက်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဖေါ်နှစ်ယောက်သားကြား -
• Lack of communication ဆက်သွယ်ရေး ချို့ယွင်းတာရှိနေရင်၊
• Hurt feelings ဆက်ဆံရေး ကျဲနေရင်၊
• Unresolved conflicts ရှင်းမရသေးတဲ့ အိပ်တွင်းရေး ပြဿနာ တစုံတရာ ရှိနေရင်၊
• Emotional intimacy စိတ်လှုတ်ရှားမှုတွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကို ထိခိုက်စေမယ်။
• Neurological premature ejaculation အာရုံပိုင်းကြောင့် ချို့ယွင်းတာလို့ ခေါ်တယ်။
Extreme arousal လိင်စိတ် ဖြစ်လာအောင် နိုးဆွတဲ့အဆင့် (၁) က သိပ်ကဲလွန်တာဆိုလဲ ဒီလို ဖြစ်ပါသေးတယ်။ ၁၉၉၉ သုတေသန တခုအရ အမျိုးသမီးရဲ့ Menstrual cycle ရာသီစက်ဝန်းနဲ့ ဆက်စပ်မှု တစုံတရာရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ Fertile phase ကလေးရနိုင်တဲ့ ကာလမျိုးတွေ (လလည်ရက်တွေ) မှာ အချိန် အတိုဆုံး ဖြစ်နေတယ်။ အဖေါ် အမျိုးသမီးက အသက် ပိုကြီးနေရင် ရွယ်တူ အတွဲတွေထက် အချိန်ပို တိုတတ်တယ်။
ရုပ်ပိုင်းကနေ ဖြစ်စေနိုင်တာတွေ -
Mechanism of Ejaculation သုတ်လွှတ်ဖြစ်စဉ်မှာ (၂) ပိုင်းရှိတယ်။
1. Emission ပဌမအဆင့်မှာ Ampullary vas deferens, Seminal vesicles နဲ့ Prostate gland သုတ် ဖြစ်ပေါ်ရာနဲ့ သုတ် ပို့ဆောင်ရာတွေကနေ Posterior Urethra ဆီးသွားပြွန်ရဲ့ အရင်းပိုင်းကို Seminal fluid သုတ်ရည်တွေ ရောက်လာတယ်။ Sympathetic motor neurons (ဆင်ပသက်တစ်) အာရုံကြောတွေက အဆင့် (၁) ကို လုပ်ပေးတယ်။
2. ဒုတိယဆင့် Expulsion ဆိုတာ ဆီးအိမ် လည်ပင်းနေရာက ပိတ်လိုက်ပြီး၊ Pelvic-perineal and Bulbospongiosus muscle ကြွက်သားတွေကနေ Rhythmic contractions စည်းချက်ကျကျ ညှစ်အား ဖြစ်လာပြီး၊ Urethra ဆီးသွားပြွန် တုံခါလာမယ်။ External urethral sphincters ဆီးထွက်ပေါက်နေရာ အထိန်းက Relaxation လျော့ပေးလာမယ်။ Somatic and Autonomic motor neurons (ဆိုမက်တစ် နဲ့ မိုတာ နူရုန်း) အာရုံကြောတွေက ဒုတိယဆင့်ကို လုပ်ပေးကြတယ်။
ဦးနှောက်ထဲမှာ Nucleus paragigantocellularis နေရာက ဒီအရေးမှာ ထိန်းပေးပါတယ်။ Genetic link မျိုးရိုး လိုက်သလားဆိုတာ သံသယရှိတယ်။ လူနာတွေထဲက ၉၁% မှာ အမျိုးထဲမယ် သူ့လိုမျိုး တယောက်မက ရှိနေတယ်။
• Delayed ejaculation တော်တော်နဲ့ သုတ်မလွှတ်တာ၊
• Retrograde ejaculation သုတ်နောက်ပြန်ထွက်တာ နဲ့
• Inhibited orgasm in males အပြီးမသတ်နိုင်တာတွေက ခွဲခြားရမှာတွေ ဖြစ်တယ်။
၂ဝဝ၅ ခုမှာ အသက် ၁၉ ကနေ ၇၃ နှစ်အရွယ်၊ (ပျမ်းမျှ အသက် ၄ဝ နှစ်) ရှိတဲ့ လူပေါင်း ၄၉၁ ယောက်ကို စမ်းသပ်တယ်။ သူတို့က ၄ ပါတ်အတွင်း လိင်ဆက်ဆံမှု အကြိမ်ပေါင်း ၄ဝဝဝ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။ အတွဲ ၁ တွဲဟာ ၁ ပါတ်မှာ ဂ ကြိမ် ပျမ်းမျှ ဆက်ဆံတယ်။
• ၁၄% သော ယောက်ျားတွေက ၂ဝဝ စက္ကန့်ထက် နဲတယ်။
• ၃ဝ စက္ကန့်ကနေ ၄၄ မိနစ်ကြာတယ်။ ပျမ်းမျှ ၅့၎ မိနစ်ရှိတယ်။ တူရကီမှာ ၃့၇ မိနစ်၊ ဗြိတိန်မှာ ၇့၆ မိနစ်။
• Circumcision ပန်းအဖျား လှီးဖြတ်တာနဲ့ အဲလိုမလုပ်တာ ဘာမှ ကွာခြားတာ မတွေရ့ဘူး။
• Condom (ကွန်ဒွမ်) သုံး-မသုံးမှာလဲ ကွာတာ မရှိဘူး။
Treatment ကုသတာမှာ -
• သာမန်ဆိုရင် တဖြေးဖြေး တိုးတက်လာစေအောင် သင်တန်းပေးမယ်၊ စိတ်အားပေးမယ်။
• တခါဆက်ဆံပြီး နောက်ခါ ဆက်ဆံရင် အချိန်ပိုကြာတယ်။
• Anaesthetic creams ထုံဆေး (ခရင်) လိမ်းတာလဲ တချို့အတွက် ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထုံနေလို့ ခံစားမှု လျော့စေတယ်။
• Masters and Johnson ရဲ့နည်းတခုက Start and Stop technique ဆက်ဆံပါ၊ မပြီးခင်နားပါ ဆိုတာဖြစ်တယ်။
• Intracavernous လိင်တံထဲ Vasodilator သွေးကြောကျယ်ဆေး ထိုးနည်း။ စမ်းတဲ့သူ ၇ဝ% အကျိုးရှိတယ် ဆိုပါတယ်။
• Enlast, Confido, Alpha7, Climax, Priligy, StalliOn247, Generic Ambllis နဲ့ Xytomax ဆေးတွေက Herbal (ဟာဗယ်) ဆေးတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
• Prexil, VigRX Plus နဲ့ PreJac တွေက Allopathic medicine (Western medicine) လို့ (အငြင်းမလွတ်) ခပ်လွယ်လွယ် ခေါ် ဆေးနည်းတွေက ရောင်းနေတာတွေ ဖြစ်တယ်။
• Serotonin ခေါ်တဲ့ Neurotransmitter အာရုံသတင်းပို့ ဟော်မုန်းက ဒီနေရာမှာ အရေးပါတယ်။ သူ နည်းနေရင် သုတ်လွှတ်မှာကို စောစေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) ဆေး ပေးရင် အကျိုး များတာ လာတွေ့ရတယ်။ Dapoxetine (Priligy) ဆေးက (SSRI) အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ အချိန်တို အကျိုးသက်ရောက်စေတယ်။ Anti-anxiety medication စိတ်ဆေးပါဘဲ၊ နဲနဲပြုပြင်ထားတယ်။
• Dapoxetine Hydrochloride (Priligy) ဆေးကို ဝယ်လို့တော့ရနေပြီ။ US မှာ FDA တရားဝင်ဖြစ်လာဘို့ အဆင့် ၃ ရောက်နေပေမဲ့ တခြားနေရာတွေမှာ ဝယ်လို့ရနေပါပြီ။ 30 or 60 milligrams သောက်ရတယ်။ ၃ ဆ ကနေ ၄ ဆ ပိုကြာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သုတ်လွှတ်စောခြင်း အဆက်၏ နောက်ဆက်တွဲ
• Premature ejaculation သုတ်လွှတ်စောတာ ခံစားနေရသူ တကမ္ဘာမှာ ၁၆ နှစ်နဲ့ ၅၅ နှစ်ကြား ယောက်ျား အားလုံး ၄ဝ% ရှိနိုင်ပါသတဲ့။
• Viagra ဆေးက ပန်းညှိုးနေသူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။
• Dapoxetine Hydrochloride ဆေးကို သုတ်လွှတ်စောတတ်သူတွေအတွက် ဆေးကောင်းဖြစ်လာစရာရှိတယ်လို့ ပြောနေပါတယ်။ တကယ်ပျောက်မှာလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါတဲ့။
• Dapoxetine ဆေးက စမ်းတုံးရှိပါသေးတယ်။ အမေရိကား၊ အိန္ဒိယားမှာ ရောင်းရောင်းနေပြီ။ FDA approval ရဘို့ တတိယအဆင့်ကို Ortho-McNeil's Ortho Urology unit ကနေ စမ်းသပ်မှု လုပ်ပါတယ်။ Monogamous sexual relationships ခေါ်တဲ့ တကြိမ်မှာ တယောက်ထဲကိုသာ အနည်းဆုံး ၆ လ အိမ်ထောင် ပြုထားသူ ၂၆၁၄ ဦးကို စမ်းပါတယ်။ Control ထိန်းထားနိုင်တာရော Satisfaction ကျေနပ်မှုမှာပါ တိုးတက် ကောင်းမွန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
• Dapoxetine က generic ဆေးနာမယ်ဖြစ်ပြီး ရောင်းတဲ့အခါ Priligy နာမယ်နဲ့ ရောင်းပါတယ်။
• Dapoxetine ဆေးဆိုတာ Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) ဖြစ်ပြီး Depression စိတ်ကျဆေး အနေနဲ့ သုံးနေတာပါ။ ဒီဆေးကို တရားဝင်ဝယ်လို့ရဘို့ နှစ်နဲ့ချီ စောင့်ရပါအုံးမယ်။
• လူတွေ ပျမ်းမျှ တခါဆက်ဆံရင် ၅ မိနစ်ကြာတာ ပုံမှန်သတ်မှတ်ပါတယ်။ Dapoxetine ဆေးသုံးရင် ၁၂-၁၇ မိနစ် ကြာစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
• Sexual stamina ကောင်းစေတဲ့ Herbal သဘာဝဆေးမျိုး ကြောညာထားတာ ထိပ်ဆုံးမှာ ၃ ခု တွေ့ပါတယ်။ (ဟာဗယ်) ဆေးတွေမို့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး သိပ်ဆိုးမယ် မထင်ပါ။
• Priligy 30mg ၃ ပြားကို $81.61 ဒေါ်လာ၊ ၆ ပြားကို $143.03 ဒေါ်လာ၊
• Priligy 60mg ၃ ပြားကို $102.26 ဒေါ်လာ၊ ၆ ပြားကို $174.84 ဒေါ်လာ၊
• Prexil ဆေးကလဲ ၃-၅ ဆ ပိုကြာစေတယ်။ ပဌမလမှာ ၂-၄ မိနစ်ပိုကြာမယ်။ ဒုတိယနဲ့ တတိယလတွေမှာ ၂-၃ ဆ ပိုလာမယ်။ ၄ လ နဲ့ ၆ လ အတွင်းမှာ ၃ ဆကနေ ၅ ဆပိုကြာမယ်။ နောက်လတွေမှာလဲ ပိုသထက် ပိုပါမယ်တဲ့။
• VigRX Plus ဆေးကြော်ညာက ပိုတာတွေပါ ဖတ်ရပါမယ်။ Bigger ပိုကြီးစေမယ်၊ Harder ပိုမာစေတယ်၊ Longer ပိုကြာမယ်၊ Better ပိုကောင်းမယ်၊ Powerful အားကောင်းတယ်။
• PreJac ဆေးကလဲ ကြော်ညာ ကောင်းတာပါဘဲ။
Q: ဆရာ့ ဆိုက်ထဲမှာပြောထားတဲ့ Prexil, VigRX Plus, PreJac, Priligy ဆေးတွေက ဘယ်လိုသောက်ရမှာလဲ။ တရက် တလုံးလား၊ ဆက်ဆံခါနီးလား။
1. Prexil capsule ဆေးကို တနေ့ ၁ လုံး၊ အစာစားပြီး သောက်ပါ။ ၄-၆ လ ကြာရင် အကောင်းဆုံး အခြေအနေကို ရောက်လာမယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ၂ ရက် ၁လုံး၊ နောက် ၃ ရက် ၁ လုံးသာ သောက်ပါ။ တရက် ၁ လုံး ဆက်သောက်လဲ ရတယ်။
2. VigRX Plus ဆေးကို တနေ့ ၁ လုံးသောက်ပါ။ တချို့ကလဲ တနေ့ ၂ ကြိမ် သောက်တယ်။
3. Prejac တနေ့ ကို မနက်ထမင်းစားပြီး ၁ လုံး၊ ညနေထမင်းစားပြီး ၁ လုံးသောက်ပါ။
4. Priligy tablet ဆေးကို လိင်မဆက်ဆံမီ ၁-၃ နာရီအလိုမှာ ၁ လုံး သောက်ပါ။ အစာနဲ့ နီးနီး-ဝေးဝေး ရတယ်။